08/19/14 ~ MM Daily Star
နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် သံဖြူဇရပ်မြို့ က သမိုင်းဝင် သေ...
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နှင့် သူ၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် (ဖြစ်ရ...
သင်ဖင်ပြောင်ချင်လား ? Ooredoo Internet သုံးပါ
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာသော မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (သို့...
လိင်ဆွဲဆောင်မှုကို အသားပေးလာတဲ့ မိန်းကလေး အဆိုတော်အ...
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ထူးချွန်ကျောင်းသူ မစုပုံချစ် သို့...
အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် နောက်ဆုံးအဆင့် ဇာတ်ကား ၆ ကား စာရ...
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ရှာဖွေမှုနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်များ...
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကိုတွေ့ပြီ ဟု ဆရာတော်မိန့်
ဒီနှစ် မန်ယူချန်ပီယံဖြစ်လျှင် ကိုယ်လုံးတီးပြသ အောင...
နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် သံဖြူဇရပ်မြို့ က သမိုင်းဝင် သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း
19:00 ဗဟုသုတ, သတင်း No comments
ကုန်းဘောင် မင်းဆက် ဘကြီးတော်ဘုရား လက်ထက် ခရစ်နှစ် ၁၈၂၄ - ၂၅ ခုနှစ်တွင် စစ်သူကြီး မဟာ ဗန္ဓုလ ဦးစီးသည့် မြန်မာ့ တပ်မတော် နှင့် အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့တပ် တို့ တိုက်ခိုက် ခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲ တွင် မြန်မာတို့ အရေးနိမ့် ခဲ့သဖြင့် ရန္တပို စာချုပ်အရ ရခိုင်ပြည်နယ် နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း တို့ကို အင်္ဂလိပ် တို့အား ပေးအပ် လိုက်ရသည်။ ယခင်က တနင်္သာရီတိုင်း သည် မွန်ပြည်နယ် ၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် က စပြီး တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်း မြို့နယ်မှာ ဆုံးသည့် တနင်္သာရီတိုင်း ကြီး ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ့ တို့သည် တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင်တွင် ရှိသည့် ကတန်ကျွန်းကြီး တွင် ရော်ဘာများ စတင် စမ်းသပ် စိုက်ပျိုး ခဲ့ကြသည်။ စိုက်ပျိုး အောင်မြင် သည့်အခါ သံဖြူဇရပ်ရွာ နှင့် ကျုံကဒက်ရွာ တို့တွင် အင်္ဂလိပ် ကုမ္ပဏီများ ရော်ဘာ လာရောက် စိုက်ပျိုး ခဲ့ကြသည်။ သံဖြူဇရပ် ဆိုသည်မှာ လမ်းဆုံတွင် ရှိသည့် ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ဝါခရုကမဂီယုင်္ဂ ဆောက်လုပ် လှူဒါန်း ထားသည့် ဇရပ်ကို သံဖြူ (သွပ်) အမိုး မိုးလိုက်သည့် အခါတွင် သံဖြူဇရပ် ဆိုသည့် အမည် တွင်လာ ခဲ့သည်။
သံဖြူဇရပ်သည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဂျပန်များ အုပ်ချုပ်စဉ်က နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြား ခဲ့သည်။ သံဖြူဇရပ် ချွေးတပ်စခန်း တွင် မြန်မာ - ထိုင်း မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းသို့ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်က ရထားဖြင့် ရောက်လာ ကြသည့် ချွေးတပ်သား များသည် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်သည့် နေရာသို့ သွားပြီး အခြေချ အလုပ် လုပ်ကြရသည်။ ချွေးတပ်သားများ အတွက် ပြန်လမ်း မရှိသည့် အရပ် ဒေသဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုခေတ် ထိုအခါက " သေချင်ရင် စိန်မစားနဲ့ သံဖြူဇရပ် ကိုသွား " ဟု စာဆိုတဘောင် ပေါ်ပေါက် ခဲ့သည်။
ဂျာမဏီ တို့၏ လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မာန်မာန တို့ကြောင့် စတင် ပေါ်ပေါက် ခဲ့သည့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး တွင် ဂျပန်တို့သည် မလေးရှား နိုင်ငံကို ၀င်ရောက် စီးနင်း တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက် လိုက်ပြီး ဂူအမ်ကျွန်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ကို ဗုံးမိုးရွာချ ခဲ့လေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဂျပန် စစ်တပ်၏ တရကြမ်း တိုက်ခိုက် ခဲ့သော စစ်ပွဲတွင် ဗြိတိသျှ တပ်သား ၉၀၀၀ ကျော် ကျဆုံးခဲ့ပြီး တပ်သား တစ်သိန်း ၀န်းကျင်မှာ ဂျပန်တို့၏ သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရသည်။ ကျူးကျော်သူ ဂျပန် တပ်သား တစ်သောင်း ကျော်လည်း သေပွဲဝင် ခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် ဂျပန်တို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် အတွက် ကြည်းကြောင်း ၊ ရေကြောင်း ၊ လေကြောင်း တို့ဖြင့် အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။ ဂျပန် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တူမိုယူကီ ယာမာရိုကာ သည် ဗြိတိသျှ အင်ပါယာ ၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်း ခံတပ် ဖြစ်သော စင်ကာပူ နိုင်ငံကို သိမ်းယူ လိုက်သဖြင့် ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ သည် ဂျပန်တို့၏ လက်အောက်သို့ ကျရောက် သွားခဲ့သည်။
ဂျပန်တို့သည် စင်ကာပူ နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်နိုင် ခဲ့သဖြင့် တန်ဖိုး ကြီးမားသော စက်လက်နက် အသုံးအဆောင်များ ၊ စက်ပစ္စည်းများ ၊ ရွေ့လျား နိုင်သော စက်ယန္တရား ၃၀၀ ကျော် အပါအ၀င် ထောင်ပေါင်း များစွာသော စစ်သုံ့ပန်းများ သိမ်းပိုက် ရရှိလိုက် သဖြင့် စစ်အင်အား ကြီးမား လာခဲ့သည်။ ဤတွင် စင်ကာပူ ရှိ သိမ်းပိုက် ရရှိထားသော ပစ္စည်းများကို လက်ခံ ရယူရန် သက်ဆိုင်ရာ ဂျပန် အရာရှိကို အမိန့်ဖြင့် တာဝန် ပေးလိုက်သည်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်စစ်တပ် များကို ထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာ - ထိုင်း မီးရထားလမ်း ( သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း ) ဖောက်လုပ်ရန် ပေါ်ပေါက် လာခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့သည် ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရန် စီမံကိန်း ရေးဆွဲပြီး ဂျပန်ဘုရင့် တပ်မတော် စစ်ဝန်ကြီး ဂျင်နရယ် တိုကျို က မြန်မာ - ထိုင်း မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရန် အမိန့် ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ နန်ပလာဒက် မှ စတင် ဖောက်လုပ် ထားသော မီးရထားလမ်း သည် ကန်ချာနပူရီ ကို ဖြတ်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ် မှ စီးဆင်း လာသော ကွေးနွိုင် မြစ်ပေါ်ရှိ ကွေးမြစ်ကို ဖြတ်သန်း ဖောက်လုပ် ထား၏။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူ တောင်ကြားလမ်း မှတစ်ဆင့် ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ တို့ ဖောက်လုပ် ခဲ့သော ရန်ကုန် - သံဖြူဇရပ် မီးရထား လမ်းကြောင်း ပေါ်ရှိ သံဖြူဇရပ် ၌ ဆက်သွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ - ထိုင်း မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ် ရာတွင် လုပ်ငန်းများ တစ်ပြိုင်တည်း ပြီးစီးရန် အတွက် ဂျပန်တို့သည် ဗြိတိန် ၊ အမေရိကန် ၊ သြစတြေးလျ ၊ ကနေဒါ ၊ နယူးဇီလန် ၊ နယ်သာလန် နိုင်ငံတို့မှ စစ်သုံ့ပန်း များနှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများ ဖြစ်သော အင်ဒိုနီးရှား ၊ မလေးရှား ၊ မြန်မာ ၊ ဗီယက်နမ် နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့မှ အဓမ္မ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် လာခဲ့သော အလုပ်သမား ( ဂျပန်တို့မှ ရှိမူဆာ ဟု ခေါ်၍ မြန်မာတို့က ချွေးတပ် ဟု ခေါ်သည်။ ) နှစ်သိန်းခန့် ကို အသုံးပြု ခဲ့ကြသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းပြီး အလွန် အန္တရာယ် ကြီးမားသော မီးရထားလမ်း လုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရာ လမ်းကြောင်း ပေါ်တွင် တောတောင် လျှိုမြောင်များ အထပ်ထပ် ၀ိုင်းပတ်လျက် ရှိသည်။ ကျောက်ဆောင် အမျိုးမျိုး တောင်တန်း အသွယ်သွယ် တို့ကို ဖြိုခွဲ ဖြတ်တောက်၍ တံတားပေါင်း ၃၀၀ ကျော် နှင့် ထောက်တံတား နှစ်မျိုးပေါင်း ၆၆၈ စင်း တည်ဆောက် ရသည်မှာ မဖြစ်နိုင် လောက်အောင် ခက်ခဲလှသည်။ အလုပ်သမား များမှာ အစားအသောက် ရှားပါးခြင်း ၊ အ၀တ်အထည် မလုံလောက်ခြင်း ၊ ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှု များကြားတွင် လုပ်ကိုင် ခဲ့ရသည်။ တစ်လအတွင်း လူနာရုပ် ပေါက်ကာ အရိုးပေါ် အရေတင်ပြီး နံရိုး အပြိုင်းပြိုင်း နှင့် မျက်တွင်း ဟောက်ပက် ဖြစ်သွား ကြသည်။
ဂျပန်များသည် လူတို့၏ အသက်ကို တန်ဖိုး မထားဘဲ မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရာတွင် မဟာမိတ် အကျဉ်းသား ၆၈၀၀၀ ခန့် ပါဝင်၍ ၄င်းတို့အနက် အကျဉ်းသား ၁၆၀၀၀ သေဆုံး ခဲ့ရသည်။ အာဆီယံ နိုင်ငံများမှ အဓမ္မ စေခိုင်း ခံရသော အလုပ်သမား (မြန်မာတို့က ချွေးတပ်သား ) ခန့်မှန်းခြေ သုံးသိန်းနီးပါး အနက် ရှစ်သောင်း နှင့် တစ်သိန်း ခန့် သေဆုံး ခဲ့ရသည်။
သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း ကို ၁၉၅၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ အခြေခံ စခန်းအဖြစ် သံဖြူဇရပ် ကို သတ်မှတ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်မှ အခြေခံ စခန်းကို ကန်ချနပူရီ ကို သတ်မှတ်သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင် ဘုရားသုံးဆူ တောင်ကြားလမ်း ၏ တောင်ဘက် ၁၈ ကီလိုမီတာ အကွာ ကွန်ကွိုင် မီးရထားလမ်း နှစ်ခုကို ဆက်သွယ် နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် အပြီးသတ် ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ မီးရထားလမ်း အရှည်သည် သံဖြူဇရပ် မှ ဘုရားသုံးဆူ အထိ ၆၉ မိုင်ခန့် ရှိသည်။ စုစုပေါင်း မီးရထားလမ်း အရှည်မှာ သံဖြူဇရပ် မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ပေါင် အထိ ၄၁၅ ကီလိုမီတာ ရှိသည်။
ထို သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်စဉ် မဟာမိတ် စစ်အကျဉ်းသား ဦးရေ ၁၆၈၀၀ နှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများမှ လူဦးရေ ၈၀၀၀၀ ခန့်တို့သည် အလုပ် ပင်ပန်းခြင်းဒဏ် ၊ ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုဒဏ် ၊ ကာလ ၀မ်းရောဂါ ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ၊ အာဟာရ ချို့တဲ့မှု ၊ အ၀တ်အစား မလုံလောက်မှု တို့ကြောင့် လူပေါင်း များစွာ သေဆုံး ခဲ့ကြရသည်။ မီးရထားလမ်း တစ်ကီလိုမီတာ ၏ တန်ဖိုးမှာ လူ့အသက် ၃၀ ချောင်းနှင့် ညီမျှသည်။ မီးရထားလမ်း ဇလီဖားတုံး အရေအတွက် နှင့် အညီ လူ့အသက်များ ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသည်ဟု မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။ ထို့ကြောင့် သမိုင်း ပညာရှင်များက မီးရထားလမ်း အရှည် နှင့် မီးရထားလမ်း ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ များကို နှုန်းယှဉ်၍ ၄င်း မီးရထားလမ်း ကို သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း (သို့မဟုတ်) သေရွာသို့ ပို့သော မီးရထားလမ်း ဟု သတ်မှတ် ခဲ့ကြသည်။
စစ်ကြီး ပြီးသောအခါ မဟာမိတ် တို့သည် မီးရထားလမ်း တစ်လျှောက်ရှိ သေဆုံးခဲ့ သူများ၏ အလောင်းများကို ပြန်လည် တူးဖော်ပြီး မဟာမိတ် တို့သည် စစ်သင်္ချီုင်းများ တည်ဆောက်၍ အမှတ်ရ အုတ်ဂူများ ပြုလုပ် ပေးခဲ့သည်။ အုတ်ဂူများမှာ ချန်ဂီ ၁၇၄၀ ခု ၊ ကန်ချနပူရီ ၆၉၈၂ ခု နှင့် သံဖြူဇရပ် ၌ ၃၇၇၁ ခုရှိသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် သံဖြူဇရပ် ၌ ဇီနသဟာယ စစ်သချုင်္ီင်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံ ဆာဟူးဘန်ရန် တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း က အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် မိန့်ခွန်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက ကမ္ဘာကျော် သမိုင်းဝင် သံဖြူဇရပ် ရှိ သေမန်းတမန် မီးရထားလမ်း သည် ယခုအခါ သက်တမ်း ၇၂ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း မည်မျှ ကြာသည် ဖြစ်စေ သမိုင်းဝင် " သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်း " ကိုတော့ မေ့ကြမည် မဟုတ်ကြောင်း ရေးသား တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။
18:00 ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ, ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး မှုများ No comments
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင် ရေးဗဟိုဌာန(MPC)တွင် သုံးရက်တာကျင်းပခဲ့သည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆွေးနွေးပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်များကို ကျေနပ်အားရမှုရှိကြောင်း၊ ယနေ့ MPC ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ(UPWC)၊ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(NCCT) နှင့် ပြည်နယ်ခုနစ်ခုမှ နိုင်ငံရေးပါတီတို့၏ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့နှင့် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်လာကြသည့် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၄ ဖွဲ့တို့က အကြံပြု ချက်များမပေးမီ ယခုကဲ့သို့ ထောက်ခံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းက ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပသည့် ယနေ့ သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အင်အားစု အားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်မြောက်နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါကြောင်း၊ အနာဂတ်တိုင်းပြည်တည် ဆောက်ရေးတွင် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးကြီးသည်ကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကလက်ခံ၍ ယခုကဲ့သို့လမ်းညွှန်မှုများပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် စာချုပ်ပါအချက်အလက(Single Text) ၁၂၂ ချက်အနက်တွင် အချက် သုံး၊ လေးချက်သာကျန်ရှိခဲ့ပြီး ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားရန် သဘောတူထားကြောင်း၊ ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲသည် လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အရေး ကြီးကြောင်း၊ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်လာကြသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ အမြင်သဘောထားများသည် တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် ကောင်းမွန်သည့် အခြေခံအုတ်မြစ်များအဖြစ် ခံယူထားပါ၍ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ရှေးရှုကာ ရင်းရင်းနှီးနှီးအပြုသဘောဆောင် ဆွေးနွေးကြစေလိုကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာက နှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာ၊ ကျေးလက် လူမှုဘဝမြှင့်တင် ရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်က ပြောကြားရာတွင် လွှတ်တော်များအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကော်မတီများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းသား အရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ ဆက်လက်တင်ပြပြီး ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်း သားရေးရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တန်းတူညီမျှရှိရေး၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး အစရှိသည့် ကိစ္စ ရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် NCCT မှ ဒုတိယခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ပဒိုစော ကွယ်ထူးဝင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြား ခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စား လှယ်များက သြဂုတ် ၁၅ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်များသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရရှိစေရန် နီးစပ်လာပြီဟုယုံကြည်မိကြောင်း၊ ထို့ပြင် စစ်မှန်သည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုများသည် အရေးပါကြောင်းနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုကို နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ရရှိသည့်ရလဒ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင်သင့် သည့်အချက်များအား အလွတ်သဘော အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်လာသည့် ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဗီဂျေနမ်ဘီယားက သမ္မတကြီး၏ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ က စောင့်ကြည့်လေ့လာသူအနေဖြင့် ပါဝင်ခွင့်ရသည်မှာလည်း ထူးခြားလှကြောင်း၊မကြာမီရက်များအတွင်းက တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်း ရေးအဖွဲ့ (NCCT) နှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ(UNWP) တို့အကြား အပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့၍ ယခုလို နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ရှုမြင်မိပါကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်များအား အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါကြောင်း၊ တိုးတက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်သူများ၏ ကြိုးစားမှုကြောင့်ဟု သုံးသပ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆ဝ လောက်ကတည်းက တည်ရှိနေခဲ့သော ပဋိပက္ခအား အဆုံးသတ် နိုင်ရန် အခြေခံအကျဆုံးသည် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် အားလုံးပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပနိုင်ရန် အခက်အခဲများရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူများ၏အကျိုး စီးပွားကို ဦးတည်ဆွေးနွေးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ရှေ့လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ဆွေးနွေးချက်များအားNCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာ၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာ၊ ကျေးလက်လူမှုဘဝ မြှင့်တင်ရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်နှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းတို့က ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးကာ အခမ်း အနားကို ညနေ ၄ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ် ငန်းကော်မတီ(UPWC) ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကုလ သမဂ္ဂမှ အထူးဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသားများ တန်းတူညီမျှမှုရှိရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်အရေးစသည့် အချက်များဆွေးနွေးခဲ့သည့်အပေါ် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများက ဝမ်းသာကြိုဆိုကြောင်း ယနေ့တွင် ပြုလုပ်သော သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတွင် တညီတညွတ်တည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
From: Myanma Alin
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နှင့် သူ၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် (ဖြစ်ရပ်မှန်) (စ/ဆုံး)
17:00 ဗဟုသုတ, သတင်း No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောက မှာ ထွက်ပေါ် ခဲ့တဲ့ လူမိုက် တစ်ရာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို လူကြိုက် အတော်များခဲ့ ပါတယ်..။
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါ က ရန်ကုန်မြို့မှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဦးဖိုးတုတ် ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း ကို ရိုက်ကူး ထားတယ် လို့လည်း ပြောနေ ဆိုနေတာတွေ ကြားခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီဇာတ်လမ်းခွေ ကို ကြည့်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ လမ်းမတော် ဖိုးတေ ဇာတ်လမ်း ဟာ သမိုင်း အချက်အလက် အရ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ဇာတ်လမ်းအစစ် အမှန် လုံးဝ မဟုတ်ဘူး သိလိုက် ရပါ တယ်..။
အဲဒီ ဇာတ်ကားကြည့်ပြီး တဲ့ လူတော်တော်များများ ကတော့ ဒါဟာ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် သမိုင်း အမှန်ပဲ လို့ ထင်နေကြတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ဒီသမိုင်းကြောင်း ကို ရေးသား ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူမိုက် တစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကို မင်းက ဘာလို့ ဒီလောက် ရှင်းချက်တွေ ထုတ်နေတာ လဲဆိုပြီး မေးလာ သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်..။ ကျွန်တော်ရှင်းပါ့မယ်။
ဦးဖိုးတုတ် ဟာ ကိုလိုနီခေတ် မှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက် မရှိ နာမည် အကျော်ကြားဆုံး မြန်မာ လူမျိုး လူမိုက် တစ်ဦးပါ။
ယို့ယွင်းနေတဲ့ ကိုလိုနီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် နဲ့အတူ လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ကြီးစိုးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ လူမျိုးခြား မိုက်တွေကို နှိပ်ကွပ် ခဲ့ပြီး မြန်မာတွေ ဘက်ကရပ်တည်ပေး ခဲ့တဲ့ မြန်မာ လူမိုက်ကြီး ပါ ။
မခံချင် စိတ်ကြောင့် အသက်ငယ်ငယ် မှာ လူဆိုး လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ ရပေမယ့် ဦးဖိုး တုတ်ဟာ လူယုတ်မာ တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး..။
ခေတ်ရဲ့ သားကောင် အဖြစ် လူဆိုး လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ လမ်းမတော် ဦးဖိုးတုတ်ရဲ့ တစ်ခြား မျက်နှာတစ်ဖက် မှာ ရှိနေတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ လွတ်လပ်ရေး ကိုမြတ်နိုးစိတ် ဆိုတဲ့ ဇာတိမာန်လေး ကို တွြေ့ မင်စေ ချင်လို့ ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး သမိုင်းအချက်အလက် အမှားတွေကို အမှန်လို့ မထင်စေချင်လို့ ဒီစာ ကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဆိုတဲ့ လူမိုက်ကြီး ဟာ ဟိုင်နန်ကျွန်း မှာ စစ်ပညာ သင်ကြားဖို့ သွားခဲ့တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် အတွက် ငွေကြေး အများဆုံး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းမှာ မထင်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ပေါ်လွင်စေချင် တဲ့ စေတနာလည်းဖြစ်ပါတယ်..။
ဦးကျော်ဟိန်း ရိုက်ခဲ့ တဲ့ လမ်းမတော် ဖိုးတေ ရုပ်ရှင် ထဲကလို ဖိုးတုတ် ဟာ ကုန်ထမ်း သမားတစ်ယောက် မဟုတ် သလို ဖိုးတုတ်ရဲ့ လူမိုက် ဘ၀ ဟာ အစပြုခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး ။
ဖိုးတုတ် ရဲ့ မိခင် ကြီးဒေါ်ချစ်ပု ဟာ ရန်ကုန်မြို့ (၁၄)လမ်းမှာ ဈေးရောင်းပြီး အတန်အသင့် ချောင်လည်တဲ့ မိသားစုပါ ။
ဖိုးတုတ် မှာ ညီ ကိုဘသိန်း၊ ညီမ အရပ် ၅ ပေ ၈ လက်မ ၊ အသားညိုညို နှုတ်ခမ်းမွှေး ထားတတ်တဲ့ ဖိုးတုတ် ဟာ ဘ၀ကို အပူအပင် မရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ သူပါ..။ ဖိုးတုတ် ဟာ သူနေ တဲ့ လမ်းမတော် (၁၄)လမ်း မှာ အတန်းအစားပေါင်းစုံ နဲ့ အပေါင်းအသင်း ဆန့်သူတစ်ယောက်ဖြစ် ပြီး လူငယ် ပီပီ ဂျင်ဝိုင်း ၊ ကြက်ဝိုင်း တွေ မှာ လှည့်လည်ပျော်ပါး အချိန်ဖြုန်းရင်း တစ်ခါတစ်ရံ မိခင်ကို ကူညီဈေးရောင်း ရင်းနေ ခဲ့သူပါ ။
ဦးလေးတော် သူ ရဲ့ မြို့တွင်း ဆွဲ မော်တော်ကား မှာ စပါယ်ယာ လိုက်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မဟုတ်မခံ စိတ်ကြောင့် ခဏခဏ ရိုက်မှုဖြစ် ပြီး အလုပ်ထွက်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုးတုတ်ရဲ့ လူမိုက် ဘ၀က………..ဒီလိုစပါတယ်..။
ဖိုးတုတ် ကို လူမိုက် ဘ၀ရောက်အောင် စတင်ခဲ့တဲ့ သူကတော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ခေတ် မတိုင်ခင် လမ်းမတော် လူမိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့……….ပုဏားဘထွန်း ပါပဲ…။
အဲ့ဒီခေတ်က လမ်းမတော် မှာ ပုဏားဘထွန်း ၊ သိမ်ကြီးဈေး လှဖေ ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကျောက်တံတား မတ်စတီးခန်း ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ကြက်ကျား ၊ ဘားလမ်း ဟူစိန် ဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့ မှာ သူ့အပိုင်း နဲ့သူ အပိုင် စား လူမိုက် ကြီးတွေ ကြီးစိုးခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပုလိပ်အင်အားနဲ့လူဦးရေ မမျှတဲ့အတွက် ပုလိပ်တွေ ဟာ နယ်မြေတိုင်းက အပိုင်စား လူမိုက်တွေကို ခါးပိုက်ဆောင်ထဲ ထည့်ပြီး အုပ်ချုပ် ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ် ။နယ်မြေ အပိုင် လူမိုက်တွေ ဟာ ကိုယ်ပိုင် နက် နယ်မြေထဲက ဒုစရိုက်မှု က ရတဲ့ငွေကြေး ၊ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် စီးပွားရေး သမားတွေ ရဲ့ မိမိစီးပွားရေး မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးဖို့ ပေးတဲ့ လစဉ်ကြေးကို ခံစားလေ့ ရှိပါတယ်..။
ပုဏားဘထွန်းက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် နာမည်ကြီး ပါ တယ်။ ပုဏား ဘထွန်း ရဲ့ နောက် မှာ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကကုလား သူဌေးတစ်ဦးလည်းဖြစ် လူမိုက် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ မတ် စတီးခန်း ရှိပါ တယ်။ ပြီးတော့ ပုလိပ်မင်းကြီးနဲ့လည်း ပုဏားဘထွန်း ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ အင်မတန်ရင်းနှီးတယ် လို့ နာမည်ကြီး ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ဖိုးတုတ် ကလည်း လမ်းမတော် တ၀ိုက်မှာ နည်းနည်းလေးနာမည် ထွက်လာတဲ့ ဇ ရှိတဲ့ လူငယ်ခြေတက် ကလေးပေါ့..။
ဖိုးတုတ် က ဆင်းရဲသား မဟုတ် ၊ မိုက်ကြေးခွဲခံ ရတဲ့အထဲ မပါပေမယ့် လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ရန်ကုန်မြို့ ထဲ စိုးမိုးခြယ်လှယ်နေတာ ကို လုံးဝ မကျေနပ် ၊ မြန်မာ လူမျိုးတွေ သတ္တိ နည်းလို့ လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ဗိုလ်ကျခံနေရတာ ကို မနှစ်မြို့ ၊ ပြီးတော့ သိမ်ကြီးဈေး လှဖေ တို့လို မြန်မာ လူမိုက်တွေ ကလည်း ကိုယ့် အပိုင် နယ်လောက်မှာ သာ ကျယ်နိုင်ပြီး တစ်ခြားနယ်တွေမှာ ကုလား လူမိုက်တွေ မြန်မာ လူမျိုးတွေကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို လက်ရှောင်နေတတ် ကြတာ ဟာ ဒီကုလား လူမိုက်တွေကို မြန်မာ လူမိုက်တွေ က ကြောက်လို့ပဲလို့ ယူဆမိပြီး ခံပြင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ လူမိုက်လောက ထဲ ၀င်ဖို့ ဖိုးတုတ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ပိုမို ခိုင်မာစေမဲ့… ကိစ္စတစ်ခု ပေါ်လာ ပါတော့ တယ် ။
ပြသနာက ဒါလ်ဟိုဇီလမ်း မှာအပိုင်စားပြီး ဈေးသည်တွေ ကို မိုက်ကြေးလိုက် ခွဲနေတဲ့ မတ်စတီးခန်း ရဲ့ တပည့် မာမွတ် နဲ့ဖိုးတုတ် တို့ စကားများရာ က ဖိုးတုတ် က မာမွတ်ကို မူလီခေါင်းတပ် တုတ် နဲ့ မသေ မရှင်ရိုက်လိုက်ရာ က စတာပါ..။
မာမွတ်ကို ရိုက်လိုက်တဲ့ ကိစ္စအတွက် လူမိုက်ကြောနောကြေနေ တဲ့ မတ်စတီးခန်း က သူ့တပည့်ကုလား လူမိုက်တွေ ကို ဖိုးတုတ်ကို ရန်သွား မရှာကြဖို့ ၊ ဖိုးတုတ် ဟာ မီးခဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး တားမြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်..။
ဒါပေမယ့် မာမွတ် ကိစ္စမကျေနပ် တဲ့ မတ်စတီးခန်း တပည့် နှစ်ယောက်က ဖိုးတုတ် ကို ပြသနာ ရှာကြရာ မှာ နှစ်ယောက်လုံး ဖိုးတုတ် က ဓါးမြောင် နဲ့ထိုးလွှတ်လိုက်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် လည်း မတ်စတီးခန်းရော ၊ ပုဏားဘထွန်း ပါ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ဖိုးတုတ် ကို ပြသနာ လာမရှာကြတာကိုက ဖိုးတုတ်အတွက် ၀ိရောဓိဖြစ်စရာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် ..။
ပုဏားဘထွန်းက သူ့လူကို ထိရင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်တတ်သည် ဆိုတာ ရာဇ၀င်တွေ ရှိတာကို ဖိုးတုတ်သိ သည်.. ဒီအတိုင်း ထိုင်နေပြီး သူလာမယ့် အချိန် စောင့်နေတာ ထက် ပုဏားကို သွားရှင်းမည်။ ပြီးတော့ နယ်မြေ အပိုင်လူမိုက်တွေ ကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဆက်ရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ တယ်………..။
၁၉၃၂ ခုနှစ် ၊ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော် (၁၁)လမ်း ၊
လမ်းမတော် တစ်ရပ်ကွက်လုံး မှ ဆင်းရဲသား ၊ လူချမ်းသာ ၊ ဖိုးတုတ် ၏ မိဘများပါ မကျန် ဖိန့်ဖိန့် တုန်အောင် ကြောက်ရွံ့ရသော ၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ အခြားနယ်မြေ အပိုင်စား လူမိုက် အချင်းချင်းပင် ဆရာကြီး ဟု ရှေ့က တပ်ခေါ် ရလေသော ပုဏားဘထွန်း ၏ အိမ်ရှေ့သို့ မြနေအောင်သွေးထားသည့် ငှက်ကြီးတောင် ဓါးဖြင့် လူမိုက်ပေါက်စ တစ်ယောက်ရပ်နေသည်…။
ဖိုးတုတ်……ငှက်ကြီးတောင်ဓါး ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ပြီး တစ်ယောက်ချင်း ဓါးချင်း ယှဉ်ခုတ်မည် အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ ဖို့ စိန်ခေါ်ပါတယ် ။
တပည့်တပန်း အလွန်ပေါများပြီး လူမိုက် အချင်းချင်းပင် ကြောက်ရသော လူမိုက်ကြီး ပုဏားဘထွန်း အ်ိမ်ပေါ်က လုံးဝ ဆင်းမလာ ။
တကယ်တော့ ပုဏားဘထွန်းနဲ့ ဖိုးတုတ် အသက်ချင်း အရွယ်ချင်း ကွာလွန်းနေပြီ ။ ဘယ်လောက်ပဲ မိုက်ခဲ့ မိုက်ခဲ့ နွားအို က ပေါင်ကျိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ ပုဏား အနေဖြင့် ဖိုးတုတ် နှင့် တစ်ယောယ်ချင်း ယှဉ်လို့ မဖြစ် နိုင်တော့မှန်း သိသည်.. အိမ်ပေါ်က လုံးဝဆင်းမလာ ။
အကြိမ်ကြိမ် စိန်ခေါ်ပြီး ဖိုးတုတ်က စကားတစ်ခွန်းပြော သွားသည် ။
" ခင်ဗျားက လူမိုက် ပုဏား မဟုတ်တော့ဘူး.. ဆန်တောင်းတဲ့ ပုဏ္ဍားဖြစ်သွားပြီ……….
ဖိုးတုတ် က ဒီနေ့က စပြီး လမ်းမတော် လူမိုက်ဖြစ်သွားပြီ "
တကယ့် ၀ါရင့်လူမိုက်ကြီး ပုဏားဘထွန်း ကိုပင် အိမ်ရှေ့သွား စိန်ခေါ်သော ဖိုးတုတ် သတင်း က တစ်ခြား နယ်ပယ် ပိုင် လူမိုက်ကြီးတွေကြား ဂရက် ရိုက်သွားပါတော့တယ်…။
အဲ့ဒီလို နဲ့ ရန်ကုန် လူမိုက်လောက မှာ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် က အချိန်တို အတွင်း နေရာရခဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့ဒီခေတ်က ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက် အသီးသီးမှာ တစ်ဗိုလ် တစ်မင်း စိုးမိုး မင်းမူနေသည့် ရပ်ကွက် အပိုင် စား လူမိုက် များ သာ ကြီးစိုး ပါတယ်..။ လူမိုက် အချင်းချင်းနယ် မကျော်ကြပဲ နယ်ကျော် တဲ့ လူမိုက်တွေ အတွက်လည်း ဇာတ်သိမ်း မကောင်းခဲ့တာ ထုံးစံလိုဖြစ်နေ ခဲ့ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ကတော့ လမ်းမတော် တစ်ရပ်ကွက်ထဲ မှာ ထိုင်ပြီး မင်းမူနေရုံ နဲ့ ကျေနပ် နိုင်သူ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဖိုးတုတ် ပထမဆုံး မျက်စောင်းထိုးတာ ကတော့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ပါ.. ။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း မှာက ဗိုလ်တစ်ထောင် ၊ ကျောက်တံတား လူမိုက် မတ်စတီးခန်း ကြီးစိုးနေပါတယ် ။
မတ်စတီးခန်း က တော့ သူ့လက်ရုံး မာမွတ်ကိစ္စပြီး ကတည်းက ဖိုးတုတ်ကိုေ၇ှာင်ဖို့ သူ့တပည့်တွေကို မှာပါတယ်..
ဒါပေမယ့်…………ဖိုးတုတ် ပန်းဆိုးတန်း ကို ကိစ္စ တစ်ခုနဲ့သွားတဲ့ ည မှာ မတ်စတီးခန်း တပည့် တစ်ယောက် က နယ်ကျော်လာ တယ်ဆိုပြီး ဖိုးတုတ်ကို ရင့်ရင့် သီးသီးပြောခဲ့တဲ့ အတွက် အဲ့ဒီ လူမိုက် ဟာ ဖိုးတုတ် ဓါးချက်နဲ့ အူပွင့်တဲ့ အထိ အထိုးခံခဲ့ ရပါတော့တယ်..။
မတ်စတီးခန်း ဟာ ဖိုးတုတ် နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့မယ် ထင်ခဲ့ပေမယ့်… သူ တကယ်ရင်ဆိုင် လိုက်ရတာက သူ့ဗိုလ်တစ်ထောင်နယ်ထဲ က လူမိုက်ပေါက်စလေး ငမိုး ပါပဲ..။ မတ်စတီးခန်း ရဲ့ တပည့်တွေ ကြီးစိုးနေ တဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင် ဘုရားပွဲတော် ညတစ်ည မှာ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ထဲက ပျံကျပေတေနေတဲ့ ဆိုးသွမ်း လူငယ်လေး တစ်ယောက်က မတ်စတီးခန်း တပည့် ကုလားလူမိုက် (၈)ယောက်ကို ဓါးနဲ့ ၀င် ပိုင်းပါတယ် ။
ကုလားလူမိုက် (၃)ယောက် သေလုမျောပါး ဒဏ်ရာရသွားကြပြီး ကျန်တဲ့ လူမိုက်တွေလည်းခွေးပြေး ၀က်ပြေး ပြေးခဲ့ ရပါတော့တယ်…. ဒီအချိန်က စလို့ မက်စတီးခန်း ဟာ ပန်းဆိုးတန်း ကို ဖိုးတုတ်လက် ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကို ငမိုးလက် အပ်ပြီး လူမိုက်လောက ကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ် သွားပါတော့ တယ်..။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် နဲ့ မရှေးမနှောင်း မှာပဲ ဓားရေးကြွယ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး ရဲ့ နာမည် ဟာလည်း ရန်ကုန် လူမိုက်လောက မှာ တဖြည်းဖြည်းကြီးမား လာပါတော့တယ်..။
ငမိုး ပခုံးချင်းယှဉ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် က သူ့ထုံးစံ အတိုင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတော့တယ်..။
ရန်ကုန်ရဲ့ ချမ်းစီးစီး ဒီဇင်ဘာ မနက်ခင်း တစ်ခုမှာ သက္ကလပ် အင်္ကျီအထူစားအောက်မှာ ဓားရှည် တစ်ချောင်း ကို လွယ်ပြီး ဘိုကလေးဈေး (ဘရုတ်ကင်းဈေး) လမ်းထဲ ကို ၀င်လာတဲ့ ဖိုးတုတ် ကို တွေ့ရပါတယ်..။
ဖိုးတုတ်က ဗိုလ်တစ်ထောင်ငမိုးအိမ်ရှေ့ရပ်လိုက်တယ်ဆိုလျှင်ပဲ…ငမိုးဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ပြူးပြူး ပြာပြာဖြစ် သွားပါတယ် …. ငမိုး ချက်ချင်း အိမ်ပေါ်ကပြေးဆင်းပြီး လာရင်း ကိစ္စကိုမေး ပါတော့တယ်.။
ဖိုးတုတ် က သက္ကလပ် အင်္ကျီ ကို ဆွဲချွတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုကော့ပေးသည်.. အေး ငမိုး မင်းဓါးရေးထက် တယ်ဆိုလို့ ငါလာ အထိုးခံကြည့်တာ ဟု အော်ကြီး ဟစ်ကျယ်ပြောတော့သည် ။
ငမိုးကလည်း လူနပ်…။ ပုဏားလိုတော့ အရှက်ကွဲ မခံနိုင် ။ ဒီတော့ ဖိုးတုတ် ကို ပြုံးပြရင်း
"ဟာ အကိုကြီး ကလည်း မဟုတ်တာ ဒီအကြောင်းတွေ မပြောပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဗမာညီအစ်ကို ချင်း ကြား မှာ ဒါမျိုးတွေရှိသေးလားဗျာ.. အကိုတွေ့ချင်ရင်ခေါ်ခိုင်း လိုက်ပေါ့..တကူးတက ကျွန်တော့်ဆီ လာနေရ တယ်လို့"
"အေး မင်းက ဗိုလ်တစ်ထောင် မှာ ဗိုလ်မထားဘူး ဆိုလို့.. ငါကလည်း ဗိုလ်လာ လုပ်တာလေကွာ"
"ဟာ အကိုကြီးရာ ကျွန်တော့် ကို မကြိုက်တာရှိရင် ဆုံးမလို့ရပါတယ်.. နာခံပါ့မယ်..ကျွန်တော် အကိုကြီး ကို ဧည့်ဝတ်ပြုပါရစေ "
ဖိုးတုတ် ဘာမှ မပြောတော့ပါ… ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး … နယ်မြေ ချင်း စည်းမကျော် ဖို့သာပြော ခဲ့ပြီး ..။
အပြန်တွင်တော့ အလာတုန်း ကလို မဟုတ်…………ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုးပိုင် ရထားလုံးနှင့် ဖိုးတုတ်ကို အိမ်အရောက် လိုက်ပြန်ပို့ပေးပါတော့တယ်………….။
အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး သေဒဏ် ကျသွားတဲ့ အချိန်အထိ ဖိုးတုတ်နဲ့ ငမိုးတို့ဟာ သံခင်း တမန်ခင်း ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဘာပြသနာ မှ ထပ်မဖြစ်ကြတော့ပါဘူး..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဟာ အရင် လူမိုက်တွေလို ကိုယ့်နယ်မြေ ကျဉ်းကျဉ်းလေး ထဲ မင်းမူနေတာ မဟုတ် တဲ့အတွက် ကြည်မြင်တိုင် ၊ ပုဇွန်တောင် ၊ လသာ ၊ ကမ်းနားလမ်း သိမ်ကြီးဈေး လူမိုက်တွေက အစ ဖိုးတုတ်ရဲ့ တပည့်အဖြစ် ၀င်ရောက်လာပြီး နယ်မြေဆိုင်ရာ ဆက်ကြေး တစ်ပုံကို လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ထံ သွင်းကြရပါတော့တယ် ..။
ရန်ကုန်မြို့ထဲ က ဘိန်းခန်းများ ၊ ဇိန်ခန်းများ ၊ ဟိုတယ်များ ၊ ပျော်ပွဲစား ရုံကြီးများ မှ အစ သိမ်ကြီးဈေး၊ သံဈေး ရှိ အရောင်းအ၀ယ် ဒိုင်ကြီးများ၊ လောင်းကစား ၀ိုင်းများ အလယ် ၊ ကြည့်မြင့်တိုင် စက်ဆန်း ပြေး ဆွဲသော ဘတ်စ်ကားလိုင်းတွေ ၊ ဂိတ်ထိုးသည့် Taxi ကားများ အဆုံး လစဉ် ဆက်ကြေး များအား ဖိုးတုတ် ထံ ပေးသွင်းရတော့သည်..။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ၀င်ငွေက တစ်လလျှင် (၃၀၀၀)နီးပါး ရှိသည် ဟု ခန့်မှန်းကြ သလို ဖယ်မလီယာ ကား(၂)စီးနှင့် မော်တော် တစီးပိုင်သည် အထိ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လာခဲ့တော့သည်..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်က ရာဇ၀တ်မှုများ လိုက်ရာတွင် နာမည်ကြီးသော ရှေ့နေကြီး ပန်ကာအေးကို လို လူကို ပင် ဥပဒေ အကြံပေးအဖြစ် လစာပေး ငှားထားလိုက်သေးသည်..။
နာမည်ကြီးလာသည် နှင့်အမျှ အပေါင်းအသင်း များလာသည် ။ ဗိုလ်အောင်ဒင် ရုပ်ရှင်မင်းသား ခင်မောင်ရင် ၊ ဇာတ်မင်းသားရွှေကျီးညို တို့ ဖိုးတုတ်နှင့် တတွဲတွဲ ဖြစ်လာသည် ။ နိုင်ငံရေးလောက မှ အမတ် များနှင့် တစ်စားပွဲတည်း ထိုင်သောက်နိုင်သည် အထိ ဖိုးတုတ် ပါဝါက ကြီးမားခဲ့သည် ။
လူမိုက် ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား ဆိုသော ဆိုရိုးစကား ရှိပါတယ်… ဖိုးတုတ် က ဂျိုနဲ့ လူမိုက် မဟုတ်ပေမယ့် နှလုံးသား နဲ့ လူမိုက်ပါ……….။
ဖိုးတုတ် နှလုံးသား ကို ညှိငင် ဖမ်းစားထားတာ က လမ်းမတော် သူ တရုတ်ကပြား မသင်းမြ..။
မသင်းမြ က အဖေ မရှိတော့ အမေနဲ့အဒေါ်က လမ်းမတော် (၂၄)လမ်း၊ ကွမ်းတန်းဈေး တွင် ဈေးရောင်း တဲ့ သူတွေ.. ဖိုးတုတ် အမေနဲ့ မသင်းမြ အမေက ဥပုသ်စောင့် ၊ ဘုရားသွား အတူတူ လူရင်းတွေ..။
ငွေရေးကြေးရေးတောင့်တင်းပြီး ဖိုးတုတ် အမေ ဒေါ်ချစ်ပု ငွေလို လျှင် မသင်းမြ တို့ မိဘတွေ က ထောက် ပံ့နေကြ။ မသင်းမြ ကို ဖိုးတုတ် ကြိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဖွင့်မပြောရဲ ခဲ့… မသင်းမြ ရှေ့ရောက် လျှင်ပင် လူမိုက်ကြီး က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စကားမပြောရဲရှာ ..။
ဒါပေမယ့် တပည့် အရင်းတွေ..အပေါင်းအသင်း အရင်းတွေ နဲ့ အတူတူသောက်ကြတဲ့ အရက်ဝိုင်း မှာတော့ ဖိုးတုတ်ကြီး ရဲ့ ရင်တွင်းဝေဒနာတွေ က အန်အန် ထွက်လာ တတ်လို့…. ဖိုးတုတ် ရင်တွင်းက အချစ် ဓာတ်တွေ ကို သူ့ညီ ဘသိန်းနဲ့ တပည့် ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ လသာ လူမိုက် စံဘသောင်းရီ (ခေါ်) ဂန္ဒမာ ဆောင်းရင် ၊ ကမ်းနားလမ်း အုန်းဖေ ၊ လွစ်စ်လမ်း ငညွန့် ၊ တာမွေအောင်ဘ ၊ လက်ကောက် ချန်ထွန်း တို့က အူမချေးခါး မကြားချင် မှ အဆုံး သိထားပြီးသား..။
မသင်းမြ က ဘာသာ တရားရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ကြီးပြင်း လာခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ပီပီ ဖိုးတုတ်လို နာမည် ကြီး လူမိုက် ကို ဝေးဝေးရှောင် ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မသင်းမြက ဖိုးတုတ်ညီ ကိုဘသိန်း နဲ့တော့ တော်တော် ရင်းနှီးပါတယ်တဲ့……။
ဈေးထဲမှာ မသင်းမြ ကလည်း မဟုတ်မခံ ဇတ်ဇတ်ကြဲ…ဆိုတော့ ဘသိန်း က သူ့အကိုနဲ့ စိတ်ချင်းတူ သဟဲ့ ဆိုပြီး မသင်းမြ ကို သူ့အကို ဖိုးတုတ်နဲ့ ကြိတ် သဘောတူနေပါတယ် ။
မသင်းမြ ဈေးရောင်း တဲ့နေရာကို ဘသိန်း ရောက်လာပြီး ကိုဖိုးတုတ် က မသင်းမြ ကို ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း ကို အောင်သွယ်ပြောပါတော့တယ်.. အဲ့ဒီမှာ မသင်းမြက ဘသိန်းကို ခဲနဲ့ကောက်ထု လိုက်ပါလေရောလား…နဖူး အာလူးသီးကြီး ကို အုပ်ပြီး အောင်သွယ်တော် ဘသိန်းက စပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့ဒီညက လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် နှင့် တွဲဖက် ရုပ်ရှင် မင်းသားခင်မောင်ရင် ၊ ဇာတ်မင်းသား ရွှေကျီးညို ၊ ရုပ်ရှင် မင်းသားကျော်စိုး တို့ နန်းသီတာ ဆိပ်ကမ်းက သင်္ဘော တစ်စီးပေါ်မှာ လေညှင်း ခံရင်း အရက်သောက်ခဲ့ရာ မှ အမူးလွန်သွားခဲ့ ပါတယ်..။
ခင်မောင်ရင် ကားနဲ့ ဖိုးတုတ် ကို အိမ်အထိ လိုက်ပို့ကြပြီး သူငယ်ချင်းတွေပြန်သွားကြတော့ ဖိုးတုတ် အိပ်ပျော်သွား ပါလေရောလား..။
မနက် မိုးလင်းတော့ အခန်း တံခါးခေါက်သံကြောင့် ဖိုးတုတ် တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့…သူ့ညီ ဘသိန်း နဲ့ တပည့်တွေက မိန်းမ တစ်ယောက်ကို အတင်းဆွဲခေါ်လာပြီး ဖိုးတုတ် အခန်းထဲ အတင်း တွန်းပို့တော့ ပါလေရော..။
"ဟေ့ ကောင်တွေ ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ"
"အကိုပဲ ညက မသင်းမြ ကို မရရင် သေတော့မယ်ဆို..အဲ့ဒါနဲ့ ကျုပ်တို့ စီမံလာပေးတာ" ဘသိန်း က ပြောပြော ဆိုဆိုနှင့် တံခါးကို ဆွဲပိတ် လိုက်ပြီး အပြင်က သော့ခတ် လိုက်ပါတော့တယ်..။
(အမှန်က မင်းသား ခင်မောင်ရင် စနက်ပါ.. ကိုဖိုးတုတ် ကိုလိုက်ပို့ရင်း ကနေ ဖိုးတုတ် ညီနဲ့တပည့် တွေကို မင်းတို့ အကိုတော့ မသင်းမြ ကို မရရင် နန်းသီတာ ဆိပ်က ခုန်ချမယ် လုပ်နေလို့ မူးအောင် တိုက်ပြီးပြန်ခေါ် လာတာ ဆိုပြီး သရုပ်ဆောင်ပြ သွားတာကို တပည့်တွေက အတည် ထင်ပြီး အခုလို လုပ်ပေး လိုက်ကြတာပါ..ပဲ)
ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ ကို ဒေါသ ထွက်သလို..မသင်းမြ ကို အားနာနေသည် ။ မသင်းမြ က ငိုယိုနေတာမြင် ရတော့ သူ စိတ်မကောင်း.. ပြီးတော့ မသင်းမြ အမေတွေ က သူ့အမေ ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ…. အခုတော့ ဘသိန်း နဲ့ တပည့်တွေကြောင့် အမေ မျက်နှာပျက် ရတော့မည်.. ဖိုးတုတ် ကို ဆဲသည် ။ ဖိုးတုတ်က ရှင်းပြသည် ။
တကယ်တော့ ဘသိန်း နှင့်တပည့်များ က မသင်းမြ အိမ်ကနေ ဈေးကို အထွက်မှာ ကားပေါ် တင်ဆွဲလာ ခဲ့ခြင်းတဲ့…..
ရန်ကုန် တစ်မြို့လုံး လွှမ်းမိုးနေသည့် ဖိုးတုတ် ၊ ဒုစရိုက် သမားတိုင်း ဦးညွှတ်ရသော ဖိုးတုတ် ၊ အသက် အရွယ် နှင့် ဥစ္စာပစ္စည်း ရှိသော သူဌေးလေး ဖိုးတုတ် ၊ သေရဲ ၊ သတ်ရဲ ၊ ရိုက်ရဲ လူမိုက်ကြီး ဖိုးတုတ် .. အခုတော့ မသင်းမြ ကို တောင်းပန်စကားတွေ တတွတ်တွတ် ဆိုနေရှာသည်။
မသင်းမြ ကလည်း လူမိုက်တွေ ပေါများ လှသည့် ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေ မိန်းမသားတွေ ချည်း ဈေးရောင်း စားနေရ သည့် ဘ၀က မလုံခြုံ.. ဖိုးတုတ်နှင့် ပတ်သက်မိလျှင် မိမိ မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်း အားလုံးကို ဘယ်သူ မှ မတို့ရဲ မထိရဲသည့် လုံခြုံမှု ရလာနိုင်သည် ကိုတွေးမိသွားတယ် ထင်ပါရဲ့…။ အဲ့ဒီ အခန်းလေးထဲ မှာ ဖိုးတုတ် လူပျိုဘ၀ တစ်စခန်း သိမ်းသွားတော့သည်။
ဖိုးတုတ် အတု (သို့) လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်
မင်္ဂလာဆောင် ခါနီး ပျော်ရွှင်နေသော လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဒေါသ ထွက်နေပါတယ်..။
သားလုပ် သမျှ ချိုသည် ခါးသည် မပြောဖူးသော မိခင်ကြီး ဒေါ်ချစ်ပု က အခု နာနာကြည်းကြည်းနှင့် လာပြော သွားတဲ့ စကားက…..ဖိုးတုတ် ကို ယမ်းပုံ မီးကျစေပါတော့တယ်။
"ဖိုးတုတ် နင် လူမိုက် ရုံတင် မကတော့ဘူး လူလိမ် လူယုတ်မာဖြစ်နေပြီ…. ငါတို့ ဈေးရောင်းစား လာ တာ တစ်သက်လုံး သူတစ်ပါး ပစ္စည်းကိုမလိမ်မညာ ခဲ့ဘူး..နင့် ကျမှ တစ်ဈေး လုံး ဟိုးဟိုးကျော် ကလိမ် ဖိုးတုတ်ဖြစ်နေပါလားဟဲ့" တဲ့ ။
တပည့်တွေ ကို စုံစမ်းခိုင်းကြည့်တော့ ဟုတ်သည် ။
သိမ်ကြီးဈေး နဲ့ လသာ တစ်ဝိုက်မှာ ဖိုးတုတ် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကုန်တွေ မှာပြီးနယ်ပို့ သတဲ့.. ပြီးတော့ ကုန်သည်တွေ ကို ပိုက်ဆံ မရှင်းပဲ ဗြောင်လိမ်သည် ။ ကုန်သည်တွေ ခမျာ လည်း ဖိုးတုတ် ဆိုသည့် နာမည်ကြား သည်နှင့်ပင် သွား မတောင်းရဲတော့ချေ..။
ဖိုးတုတ် ဓါးဆွဲပြီး ဆင်းလာခဲ့သည်……………….။ ………..အဲ့ဒီ ဖိုးတုတ် က ဘယ်သူလဲ ။ ကြာကြာ မစုံစမ်းရ..လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်တော့ မဟုတ် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် တဲ့ ပွဲစား ဖိုးတုတ်လို့လဲ ခေါ်သတဲ့..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်…..လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ကြောင့် ဒေါသထွက်ရပြီ..။
မကြာမီ……..ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ လက်ထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ မူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် ပါလာ ပါတော့တယ်..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကို အထင်သေး သည့် အမူအယာဖြင့် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်က ကြည့်လိုက်သည်။
"ခင်ဗျား..ဘယ်သူလဲ..ကျုပ်ကို ဘယ်သူမှတ် လို့ ဒီလိုခေါ်လာတာလဲ ..သေချင်လို့လား"
"ကျုပ်နာမည် ဖိုးတုတ်ဗျ..ဖိုးတုတ်..ခင်ဗျားကြားဖူးတယ် မှတ်လား" လမ်း(၃၀) က ထပ်ဟောက်သည်။
"အေး မင်းက ဖိုးတုတ် ဆို ရော့.."
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကိုင်နေကျ မူလီခေါင်းတပ် ကြိမ်လုံးက လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် မျက်နှာပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ကျသွားသည် ။
"ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ..ကျုပ် အကြောင်း မသိသေးဘူး ထင်တယ်"
"အေး..မင်း ငါ့ကို သိက္ခာချ တယ်..လူလိမ်..ခွေး"
"ကျုပ် အလုပ်ကျုပ် လုပ်တာ ခင်ဗျားကို ဘာသိက္ခာ ချနေလို့လဲ"
"မအေ -ိုး………..ငါ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ကွ"
ဒီတော့မှ လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် ခေါင်းနပန်းကြီး သွားပါတော့တယ်……သွားပြီ သူ့ဘ၀..။
"မင်းလိမ် ထားတာတွေ (၃)ရက် အတွင်း ပြန်ပေး..မပေးရင်………………"
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် စကားမဆုံးလိုက် သလို လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်လည်း စကားပြောခွင့် မရလိုက်ပါ.. မူလီခေါင်း တပ်ကြိမ်လုံးက လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ခေါင်းပေါ် အချက်ပေါင်းများစွာ ကျရောက်လာပါတော့ တယ်…………။
(၃)ရက်မြောက်နေ့ တွင် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် သည် သူ့အိမ် ကိုရောင်းချပြီး အကြွေးများ ချေသွားပါတော့ တယ်……….။
ဖိုးတုတ်ကို နိုင်တဲ့သူ ပေါ်ပြီ
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်.. မသင်းမြ နဲ့ မင်္ဂလာဆောင် အပြီးမှာတော့ ဖိုးတုတ် ကို နိုင်တဲ့သူ ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်………..သူကတော့ ဖိုးတုတ် ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ဇနီး မသင်းမြ ပါပဲ..။ အိမ်ပေါ် တွင် အရင်လို တပည့်တွေ ဘော်ဒါတွေ နှင့် အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ မသောက်ရ ။
လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဒီဥပဒေတွေ ကို နာခံရသည်……..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကို ပြောချင်ဆိုချင် သည့် ကိစ္စများ အတွက် မသင်းမြ ကို သွားကပ်ရတဲ့ သူတွေ တောင် ရှိ လာပါတော့တယ်…….။
တစ်ခါတော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် နှင့် လမ်းမတော် အက်စပက်တော် (၁)ဦး တို့ လသာလမ်းရှိ တရုတ် ထမင်းဆိုင် တစ်ခုတွင် သွားစားကြပါတယ်…။
ဖိုးတုတ်တို့ က ဟင်းရည် ထပ်တောင်းသည့် အခါ ဆိုင်ရှင်နှင့် စကားများကြ ပါတယ်.. ဆိုင်ရှင် တရုတ် ကလည်း လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်မှန်း မသိပါဘူး..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်က ငွေရှင်း ဖို့ တရုတ် ထမင်းဆိုင်ရှင် ရှိရာ ကောင်တာ ကို လှမ်းခေါ်တဲ့ အခါ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တရုတ်က အလုပ်သမားရှိ တယ် ငါ ဆိုင်ရှင်ကွ..မင်း ဘာကောင်လဲ ဆိုပြီး ရင့်ရင့် သီးသီး ပြော လာပါတော့တယ်…
ဖိုးတုတ်က ကောင်တာ ကို ထသွားပြီး ဆိုင်ရှင် မျက်နှာကို လက်သီး နဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်…. အဲ့ဒီမှာ ဆိုင်ရှင် တရုတ် ကလည်း တုတ်နှင့် ရိုက်ရန် ပြေးထွက် လာပါတော့တယ်..။
ဖိုးတုတ် က ခါးကြား က ဓါးကို ထုတ်လိုက်ပေမယ့်..အတူ ပါလာတဲ့ ပုလိပ် အရာရှိက ဆွဲခေါ်သွားလို့ လှည့်ပြန် ခဲ့ရပါတယ်..။
ဆိုင်ပိုင်ရှင် လည်း နောက်ပိုင်း မှ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်မှန်းသိလို့ တော်တော် ထိတ်လန့်သွားပါတယ်..။
သူတို့ဆရာကို မလေးမစား လုပ်ရကောင်းလား ဆိုပြီး ဒီကိစ္စကို သိသွားတဲ့ ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ က ဒေါသူပုန် ထကြပါတယ်……..။
အထူး သဖြင့် လသာ လူမိုက် စံဘသောင်းရီ (ခေါ်) ဂန္ဒမာ ဆောင်းရင် ပါ။
သူ့နယ်မြေ ထဲမှာ သူ့ဆရာ ဖိုးတုတ်ကို မလေးမစား လုပ်ခံရသည် ဆိုကတည်းက သောင်းရီ ဒေါသ အလိပ် လိုက် ထွက်လာ ပါတော့တယ်.. ပြီးတော့ ကိုဖိုးတုတ် သူ့ကို ညိုးမည်ကို သူကြောက်သည် ။
ဒီတော့ နောက်တစ်နေ့ မှာပဲ စံဘသောင်းရီ တို့အုပ်စု တရုတ် ထမင်းဆိုင်ကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီး ပါတော့တယ် ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တရုတ်ကို လည်း ကြေးအိုးပြုတ်သည့် အိုးထဲ လက်ထည့်နှစ်သည့် အထိ လုပ်ခဲ့ကြ သည်……………လူမိုက်တို့ ၏ နှိပ်စက်မှုကြောင့် ဆိုင်ရှင် တရုတ် ရန်ကုန်ဆေးရုံ တင်လိုက်ရ ပါတော့တယ်…….။
အင်္ဂလိပ် အစိုးရပိုင်း အထိပေါက်နေသော ဆိုင်ရှင် တရုတ်၏ ဆွေမျိုး များက ဖိုးတုတ် ၏ ဇနီး မသင်းမြ ထံ လာရောက်ပြီး ဖိုးတုတ် အား ကူညီ ထိန်းသိမ်းပေးရန် လာရောက် အသနားခံသွားကြ ပါတယ်..။
မသင်းမြ နှင့် ဖိုးတုတ်ရန်ဖြစ်ကြသည်……..။
နောက်ဆုံး ကွဲမည် ကွာမည် အထိဖြစ်လာတော့……………ဖိုးတုတ် ညီ ဖူးစာရှင် ဘသိန်းက ဖိုးတုတ် လေးစား ရတဲ့ ငယ်ဆရာကြီး များဖြစ်တဲ့ ဦးဆင် ၊ ဦးသင် ၊ ဦးအောင်ဒွန်း ၊ လမ်းမတော် ဘုံကျောင်း ဆရာ ဘောမျိုးရှူး တို့ကို သွားခေါ်ရပါတော့တယ်……။
လူကြီးတွေ ဆုံးမတော့ ဖိုးတုတ် နာခံရှာသည်..အထူး သဖြင့် လူမိုက် မယား သောကများ ဆိုသည့် စကား ကို ဖိုးတုတ် နာခဲ့သည်….။
မသင်းမြ ကို တောင်းပန်တော့ မသင်းမြ က လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကို ဘာသာရေး ကိစ္စဘက် အားစိုက်ရန် တိုက်တွန်းတော့ သည်..။
လူမိုက်ကြီး ဖိုးတုတ် ကျွတ်တန်း ၀င်မည်လား……….။
ကုလား - ဗမာ ရိုက်ပွဲ
ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းရှိ မြန်မာပြည် အခြေချ ကုလားနိုင်ငံရေး သမားများက မြှောက်ပင့်ပေးကြ သဖြင့်
အိန္ဒိယ ကူလီများ လုပ်ခ တိုးပေးရေး သပိတ်မှောက်ကြသည် ။
ထိုခေတ် က ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်း တွင် ဗမာလူမျိုး ကူလီများ အလုပ်လုပ်ခွင့် မရကြ ။ ကူလီခေါင်း နာရရမ်းဆင် ဆိုသည့် ကုလားက ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် များနှင့်ပေါင်းပြီး ကြီးစိုးထား ပါတယ်..။
အိန္ဒိယကူလီတွေ သပိတ်မှောက်လိုက်တဲ့ အတွက် ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် အကြီး အကျယ် ဂယက်ရိုက်စရာဖြစ်လာ ပါတော့တယ်…..။
နဂို ကတည်းက နရရမ်းဆင် ကို အငြိတိုက်ဖို့ကြံရွယ်ထား တဲ့ ဖိုးတုတ် အတွက်တော့ အခွင့်အရေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်…။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် က သူ့တပည့်တွေ ကို စုဝေးပြီး ရန်ကုန်မြို့ ထဲ ကူလီ လုပ်ချင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုး အလုပ်လက်မဲ့တွေ ကို စုဝေးစေခဲ့ပါတယ်..။
ပြီးတော့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် နဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး သပိတ်မှောက်နေ တဲ့ ကုလား ကူလီတွေ အစား ဗမာ ကူလီတွေက အလုပ်ဝင်နိုင်ကြောင်း သွားရောက် ညှိနှိုင်းပါတော့တယ်…..။
ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်တွေ နဲ့ ကုန်သည်ကြီးတွေ က ၀မ်းသာ အားရ သဘောတူပြီး ဗမာ ကူလီတွေကို ချက်ချင်း အလုပ်ဆင်းခိုင်း ပါတော့တယ်…။
ဒီလိုနဲ့ ကြာကြာ မနေနိုင်တော့တဲ့ ကုလား ကူလီတွေ က သပိတ်လှန်ပြီး လုပ်ငန်းပြန်ဝင် တဲ့ အခါ ဗမာ ကူလီတွေ နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပါတော့တယ်…။
အဲ့ဒီ ဂယက်က စပြီး မြန်မာပြည် အနှံ့ ကုလား - ဗမာ ရိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ကုန် ပါတော့တယ်..။
အလုပ်ရဖို့ ကူညီပေး ခဲ့တဲ့ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ကို ဗမာ ကူလီတွေက တစ်နေ့ကို ငွေ(၃၀၀) ကျပ်နေ့စဉ် ပေးနေရတဲ့ အချိန်ပါ……….။
ဖိုးတုတ်နဲ့ သူ့တပည့် လူမိုက်တွေ ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ်းထဲ ပါဝင်လာတဲ့ အခါ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း တ၀ိုက်က ဂေါ်ရင်ဂျီ ကုလားများ အထိနာ ကုန်ပါတော့တယ်..။
ဒီတော့မှ အစိုးရက လည်း အဓိကရုဏ်း ကို ၀င်ရောက်နှိမ်နင်း ရပါတော့တယ်
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နှင့် အစိုးရက ပါ အဓိကရုဏ်းထဲ ပါပြီဆိုတော့ အားလုံးငြိမ်ကျ သွားတော့သည်……..။
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီ အချိန်က စလို့ အစိုးရ အဖွဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ အတွက် ဖိုးတုတ် ဟာ လျော့တွက်လို့မရ တဲ့ အင်အားစု တစ်ခုမှန်း သိသွားကြပါတော့တယ်..။
ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ်းပြီးတဲ့နောက် မသင်းမြ ကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဖိုးတုတ် ဘာသာရေး လုပ်ပါပြီတဲ့………
ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့ ရွှေဂုံတိုင် က မွန်ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ဦးဖိုးတုတ် မသင်းမြ တို့ ရေတွင်း တစ်တွင်း လှူပါတယ်..
သရက်တောကျောင်းဝင်းကြီး ထဲ ဇရပ် တစ်ဆောင်ေ၇စက်ချ လှူရင်း ဖိုးတုတ်နှင့် တပည့်များက ရဟန်းခံ ကြပါတယ်..။
အဲ့ဒီနောက်တော့ လပြည့် လကွယ် နံနက်တိုင်း ဆွမ်းခံကြွ သည့် သံဃာတော်များ ကို ဆွမ်းလောင်းနေ သည့် ဖိုးတုတ် တို့ ဇနီးမောင်နှံ ကို မြင်ရပါတော့တယ်……..။
သံဃာတွေ ကို ဆွမ်းလောင်းပြီး မိခင်နှင့် ယောက္ခမ အိမ်ကို ဖိုးတုတ်နှင့် တပည့်တွေက ဟင်းသွားပို့လေ့ ရှိသည် ။
"င့ါသမက် က လူမိုက် မဟုတ်ဘူး လူလိမ္မာလေး…." မသင်းမြ အမေ အမြဲပြော သည့် စကား။
သူ့ယောက္ခမပြော သည့် လူလိမ္မာလေး ဖိုးတုတ် က တစ်လ ကို သံဃာ အပါး (၅၀) ကို ဆွမ်းကပ်.. တစ်လ လျှင် တစ်ကြိမ် ဘုရားကိုး ဆူ ပင့် ပြီး ပူဇော်သည်………..
ဒီလို ဆိုတော့ ဘုရားဒကာ လူမိုက်လေလား……….။
မစ္စတာစကော့ဘရောင်းနှင့် See You Next Time
ကုလား - ဗမာ အရေး အခင်းပြီး ခါစ ၁၉၃၈ နှောင်းပိုင်း မှာ သာယာဝတီ ဒီစတြိတ် မှ နာမည်ကျော် ရာဇ၀တ် ၀န် (ယခုခေတ် ခရိုင်ရဲမှူး အဆင့်) ရှိ အင်ဂလိုအိုင်းရစ် လူမျိုး မစ္စတာစကော့ဘရောင်း သည် ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း ရာဇ၀တ်ဝန် အဖြစ် ပြောင်းရွေ့လာပါတော့တယ်…။
ဘရောင်း သခင် လို့ ခေါ်ကြ တဲ့ ရာဇ၀တ်ဝန် ဟာ အင်မတန် မှ လူဆိုး လူမိုက်ပေါများခဲ့တဲ့ သာယာဝတီ ဒီစတြိတ် မှာ အရက်စက်ဆုံး လို့ နာမည်ကြီးခဲ့သူပါ..။
ဆရာစံ အရေးအခင်း ကာလ ဖားရွှေကျော် တိုက်ပွဲအပြီးမှာ လယ် သမားခေါင်းတွေ ကို ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ခဲ့ သူလို့လည်း ကျော်ဇောပါတယ်..။
တစ်ည မှာတော့ ရာဇ၀တ် ၀န် မစ္စတာဘရောင်းနှင့် လမ်းမတော် ဌာနအုပ် ကိုခင်မောင် တို့ လမ်းမတော်မြို့နယ် အတွင်း နယ်မြေ အခြေအနေ လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေချိန် ..ဖိုးတုတ်တို့ အဖွဲ့နဲ့ တိုးပါတော့တယ်..။
ကုလားဗမာ အရေးအခင်းပြီး ခါစဖြစ်သည့် အတွက် လမ်းမတော် ရပ်ကွက်ငြိမ်ဝပ်ရေး အတွက် ဖိုးတုတ် နဲ့ သူတပည့်တွေ က ဘုန်းကြီးလမ်းထိပ် မှာ ကြက်ကာလသား ဟင်းချက် အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ရင်း ကင်းစောင့်ပေးနေ ကြပါတယ်..။
မစ္စတာဘရောင်း က ကားကို ရပ်လိုက်ပြီး အချိန်မတော် ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ လို့ မေးပါတယ်..။
ဖိုးတုတ် က ကင်းစောင့်ပေးနေတာဖြစ်ကြောင်းပြန်ဖြေတော့.. ဒါ နင်တို့အလုပ် မဟုတ်ဘူး ငါတို့အလုပ် ဟု ပြောဆိုပြီး ကင်းသမားတွေ ချက်စားနေ တဲ့ ဟင်းအိုး ထမင်း ပန်းကန်တွေ ကို ဆောင့်ကန် သွားပါ တော့တယ်……….။
ပြီးတော့ ဖိုးတုတ် ရင်ဘတ် ကို စောင့်ဆွဲပြီး "See You Next Time" နောက် တစ်ကြိမ်ပြန် ဆုံမယ် လို့ ပြောသွား ပါတော့တယ်.။
လမ်းမတော် ဌာနအုပ် ကိုခင်မောင်က တော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နဲ့ ရင်းနှီးသူဖြစ်တဲ့ အတွက် အားနာ နေရှာပါတယ်………။
နောက် (၅)ရက်ခန့် အကြာမှာတော့………..။
တာမွေမြင်းပြိုင်ကွင်း အတွင်း သို့ ကားအနက် တစ်စီး ထိုးဝင်လာသည် ။ အချိန်ကား ည(၁၀)နာရီ ။
ကားပေါ်တွင်တော့ အရပ်(၅)ပေ၊ (၁၀)လက်မ ခန့်ရှိ အနောက်ပိုင်း ရာဇ၀တ်ဝန် မစ္စတာ စကော့ဘရောင်း နှင့် ပုလိပ်သား(၂)ယောက် ၊ ပုလိပ်သား(၂)ယောက်ကြား မှာ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ပါလာ ပါတော့တယ် ….။
ကားကို ထိုးရပ်လိုက် သည်နှင့် မစ္စတာ ဘရောင်းက လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကို ကားပေါ်မှ ဆွဲချပြီး အဆဲ မျိုးစုံ ဆဲ ကာ ထိုးကြိတ် ကန်ကြောက်ပါတော့တယ်..။
အတူ ပါလာတဲ့ ဌာနအုပ် ကိုခင်မောင်နဲ့ ပုလိပ်သား(၂)ယောက်က လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်အကြောင်း သိသဖြင့် ဘာမှ ၀င်မလုပ်ရဲကြ..။
မစ္စတာ ဘရောင်း လုပ်သမျှ ဖိုးတုတ် က ခံနေသည်..လဲကျ သွားသော ဖိုးတုတ် အပေါ်မှ တက်ခွကာ ဖိုးတုတ် ၏ နှုတ်ခမ်းမွှေးများ ကို ဆွဲနုတ်ရာ ဖိုးတုတ် နှုတ်ခမ်းမှ သွေးများ ပါ ထွက်လာ ပါတော့တယ်..။
ဖိုးတုတ် နှင့်ခင်မင်သူ ဌာနအုပ် ကိုခင်မောင် က ဒီကိစ္စကို လုံးဝ မကျေနပ်..ဒါပေမယ့် အထက် အရာရှိ မျက်နှာဖြူဖြစ်နေပြန်တော့.. စိတ်မကောင်းရုံ မှ တပါး ဘာမှ မတတ်နိုင်..။
ည(၉)နာရီ ခန့် ဘုရင်ခံ အိမ်တော်မှ ကင်း စစ်ဆေးပြီး (၆)မိုင် ရှိနေအိမ်သို့ ပြန်လာသည့် ရာဇ၀တ်ဝန် မစ္စတာဘရောင်း ၏ ကားရှေ့တွင် လူ(၃)ယောက် က ပိတ်ရပ် လိုက်ကြသည်။
မစ္စတာ ဘရောင်း က ကားပေါ်က ဆင်း ရန်ပြင်လိုက်စဉ် တွင်ပင် လူ(၃)ယောက်က ဇာဝီတုတ် များဖြင့် ၀ိုင်းရိုက်ကြ ပါတော့တယ်………..
သွေး အလူးလူးဖြစ်နေ တဲ့ မစ္စတာဘရောင်း လမ်းမပေါ်မှာပဲ သတိလစ် သွားပါတော့တယ်..။
မစ္စတာ ဘရောင်းကိစ္စ တွင် ပုလိပ်ဌာန မှ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ကိုခေါ်ယူ စစ်ဆေးခဲ့သော် လည်း ထိုည တွင် ဖိုးတုတ် သည် လမ်းမတော်မြို့နယ် အမတ်တစ်ဦး နှင့်အတူ ကမ်းနားလမ်း တွင် ရှိနေကြောင်း အလီ ဘိုင် ပြနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပြသနာဖြစ်ပွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မစ္စတာ ဘရောင်း ယောနယ် သို့ ပြောင်းရွေ့ သွားရ ပါ တော့တယ်……..။
ရန်ကုန် လူမိုက်လောက မှာတော့ ဖိုးတုတ် ဟာ ပြည်ထဲရေး အတွင်းဝန် အထိ ပေါက်ရောက်တယ်လို့ သတင်းကြီး ကျန်ခဲ့လေရဲ့……..။
ဖိုးတုတ်နှင့် လွတ်လပ်ရေး အတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာ
ဖိုးတုတ် အမ၀မ်းကွဲ မမြရီ က သတင်းစကား တစ်ခုပါးလာပါတယ်………
သခင်အောင်ဆန်း တို့ ဂျပန်ပြည် မှာ စစ်ပညာ သင်ပြီး ပြန်အလာ ယိုးဒယားမှာ စရိတ်ပြတ်ပြီး ၀မ်းတွေ လျောနေကြတယ်.. မကြာခင် ဗမာလွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ဖွဲ့မယ်.. အဲ့ဒီအတွက် ငွေလိုနေတယ်.. တို့ဗမာအစည်းအရုံး က သခင်တွေ မမြရီ တို့အိမ်မှာ အလှူခံရင်း လာတည်းနေတယ် တဲ့…။
ဖိုးတုတ် ချက်ချင်း ပဲ မမြရီ တို့အိမ် လိုက်ရင်း သခင်တွေ နှင့်တွေ့ပြီး ငွေ(၅၀၀၀) လှူလိုက်သည်.. ထိုခေတ် က ငွေ(၅၀၀၀) က အမတ်တစ်ဦး ၏ လစာနှင့် ညီမျှသည်..။
နောက်ထပ် လည်း ရံပုံငွေ လိုအပ်ပါက မမြရီက တဆင့် ဆက်သွယ် ဖို့ သခင်တွေ ကို အထပ်ထပ် မှာ ခဲ့ပါတယ်…။
တကယ်လည်း ငွေကြေးတွေလှူဒါန်းခဲ့ ပါတယ်……။
တို့ဗမာအစည်းအရုံး အတွက် ရဲဘော်(၃)ကျိပ် အတွက် ငွေသောင်း ဂဏန်းအထိ လှူဒါန်းခဲ့သည့် သူမှာ နာမည်ကျော် လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဆိုတာ သိရတဲ့ အခါမှာတော့ ပါးစပ် အဟောင်သား ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်……..။
ဖိုးတုတ် နှင့် လူမှားတဲ့ ဓါး
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ထက် စီနီယာ ကျခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ရဲ့ တပည့် ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ ကြည်မြင်တိုင် လူမိုက် ကြက်ကျား အသတ် ခံရပါတယ်… ကြည်မြင့်တိုင် စက်ဆန်းရက်ကွက် က ပြည့် တန်ဆာ အိမ်တစ်ခု မှာ ဖိုးတုတ်ရဲ့ အချစ်ဆုံး တပည့်တွေ ထဲပါတဲ့ ကမ်းနားလမ်း ငညွန့် အသတ် ခံရပါတယ်…
ပုလိပ်က တရားခံ စုံစမ်းဆဲ မှာပဲ ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ ဆီက သတ်တဲ့ သူကို စုံစမ်းလို့ရလာပါတယ်..
ကြက်ကျား ကိုရော ငညွန့်ကို ပါ သတ်တာ က ကြည်မြင့်တိုင်ကမ်းနား က နောက်ပေါက် ကုလား လူမိုက် ဂန်ဂယား ပါ….
ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ ကို ရွေးသတ် ခဲ့တဲ့ ဂန်ဂယား ဟာ ဖိုးတုတ် ကို စိန်ခေါ်တာပါပဲ…။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဖိုးတုတ် ဂန်ဂယားနေ တဲ့ စ က်ဆန်း ရပ်ကွက်ထဲကို ဓါးရှည် တစ်လက် ခါးကြားထိုးပြီး ၀င်သွား ပါတယ်………
ဖိုးတုတ် ရဲ့ လက်စွဲ လသာ လူမိုက် ဂန္ဒမာ ဆောင်းရင် ကတော့ ဖိုးတုတ် ရဲ့ မလှမ်းမကမ်း ကနေ ဓါးရှည် တစ်လက် လွယ်ပြီး ပါလာပါတယ်..။
ဂန်ဂယားနေ တဲ့ ကြည်မြင့်တိုင် စက်ဆန်းထဲက ပြည့်တန်ဆာတွေ ရှိတဲ့ ဂိုထောင် တွေရှေ့မှာ ဖိုးတုတ် ရပ်ပြီး ဂန်ဂရားကို မေးပါတယ်……….။
ဂန်ဂရား ရှိနေတဲ့ ဂိုထောင် အပြင် ကနေ ဖိုးတုတ် စ်ိန်ခေါ် ထုတ်ပါတော့တယ်…။
ဂိုထောင် က မှောင်မဲနေတဲ့ အတွက် ခေါ်ထုတ် ရခြင်းပါ……….။
ဂန္ဒမာဆောင်းရင် ကလည်း ဖိုးတုတ်ဘေး မှာရပ်နေပါတယ်……..။
ရုတ်တရက် ဂိုထောင်အမှောင်ထဲ ကနေ တစ်စုံ တစ်ယောက်ပြေးထွက် လာတာ နဲ့ ဖိုးတုတ် က ဂန်ဂယား အမှတ်နဲ့ (၂)ချက် တိတိ ပိုင်းချလိုက်ပါတယ်………
နောက်ထပ် တစ်ယောက်ထပ်ထွက် အလာမှာ ဂန္ဒမာဆောင်းရင် က ထပ်ပိုင်း ချလိုက်ပါတယ်..
နှစ်ယောက် လုံး ညည်းသံ သဲ့သဲ့ကြားပြီး အသက် ထွက်သွားတော့မှ နောက်က ပါလာတဲ့ ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ က အလောင်းဖျောက် ဖို့ရောက်လာကြပါတော့တယ်…
ဓာတ်မီးခြစ် အလင်းရောင်အောက် မှာ ကြည့်တော့မှ ဖိုးတုတ်ပိုင်းချလိုက် တာ ကုလားမလေး တစ်ယောက်ပါ………..ဆောင်းရင် လက်ချက် မိသွားတာ ကမှ ဂန်ဂယားပါ..။
တပည့်တွေ ပြောတော့ မှ ကြည်မြင့်တိုင် ကမ်းနား မှာကြင်လည်နေ တဲ့ ရှာမီဒါ ဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ပြည့်တန်ဆာ မလေး တစ်ယောက်မှန်း ဖိုးတုတ် သိလိုက်ရပါတယ်……။
အသင့် ပါလာတဲ့ ဂုန်နီအိတ် ထဲ အလောင်းတွေ နဲ့အတူ မော်တော်ကား အင်ဂျင်တုံး အစုတ်ကြီး တစ်ခုကို ထည့်ပြီး ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ က ရန်ကုန်မြစ် ထဲ ပစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်…..။
အဲ့ဒီ ရှာမီဒါ ဟာ ဖိုးတုတ် ကို နောက်ဆုံး ထွက်သက် အထိ ဒုက္ခလိုက်ပေးခဲ့မယ် မှန်း ဖိုးတုတ် သိခဲ့လျှင်ဖြင့်………………………………..
ဖိုးတုတ် နှင့် အချုပ်
အမည် - ဖိုးတုတ်
မိဘအမည် - ဦစံညိမ် ၊ ဒေါ်ချစ်ပု
မွေးသက္ကရာဇ် - မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၁ ခုနှစ်
မွေးရာဇာတိ - ဟံသာဝတီ ဒီစတြိတ် ၊ ကမာစဲကျေးရွာ
မွေးချင်း - (၅)ယောက် ၊ဘိုးသီ(အကို)၊ မမကြီး(အစ်မ)၊မမလေး(အစ်မ)၊ ဘသိန်း(ညီ)
အလုပ်အကိုင် - ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးဘိုးသင် ထံ ကားစပါယ်ရာ လုပ်ခဲ့ဖူး ၊ အငြိမ့် ကားမောင်းလုပ်ခဲ့ဖူး၊
ဗဟန်းဂါတ် အတွင်း ဌာနအုပ် ဦးစံထွန်းရင် ၊ လသာလမ်း ဌာနအုပ် မစ္စတာဗောဘရေး တို့မှ ဖိုးတုတ် ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အား စစ်ဆေးနေ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…။
ဖိုးတုတ် အချုပ်ထဲရောက်ပါပြီ…………အမှုက လူသတ်မှု………..သေဆုံး သူက ဖိုးတုတ်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး ပုလိပ် အင်စပက်တော် ဦးဟုတ်ဂွမ်း……………။
အဲ့ဒီ ညက လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ၊ ကမ်းနားလမ်း အုန်းဖေ ၊ ထွန်းတင် တို့ လမ်းမတော် အရက်ဆိုင်တွင် ဇာတ်မင်းသားရွှေကျီးညို နှင့် ချိန်းထား သဖြင့် အရက် ထိုင်သောက်နေကြပါတယ်.. အချိန်တန် လို့ ရွှေကျီးညို က ရောက်မလာတဲ့ အခါ အနားက အငှားကား တစ်စီးကို ဖိုးတုတ် ကိုယ်တိုင် မောင်းပြီး ရွှေကျီးညို အိမ်ကို လိုက်သွားကြပါတယ်..
မြေနီကုန်း အရောက်မှာ ပုလိပ် အင်စပက်တော် ဦးဟုတ်ဂွမ်း ကို တွေ့တာနဲ့ အတူတူ အရက်သောက် ခဲ့ကြပါတယ်…
နောက်တော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်တို့(၃)ယောက် နဲ့ ဦးဟုတ်ဂွမ် တို့ ကားဖြင့် မြို့ပတ်ကြပါတယ်..။
ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနား အရောက်မှာ ဦးဟုတ်ဂွမ် က အုန်းဖေ နဲ့ ထွန်းတင်ကို ဘားလမ်း လုယက်မှုတစ်ခုမှာ ပါသည် ဟု စွပ်စွဲရာ က စကားများ ပါတော့တယ်… ဦးဟုတ်ဂွမ် က အုန်းဖေ ကို ဆဲ ဆိုတဲ့ အခါ အုန်းဖေက ရင်ဝကို ဓါးနဲ့ထိုးစိုက်လိုက် ပါတယ်…………
ကားမောင်းနေတဲ့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်က တားပေမယ့် လည်းနောက်ကျ သွားပါပြီ..
ဒါနဲ့ ဖိုးတုတ် လည်း သွေးထွက် လွန်ပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဝေဒနာ ခံစားနေတဲ့ ဦးဟုတ်ဂွမ်ကို ကားပေါ်က ဆွဲချပြီး အနီး အနား လန်ခြား အပျက်တစီးမှ ၀င်ရိုးကို ယူပြီး အဆုံး စီရင်လိုက်ပါတော့တယ်..
ထိုခေတ် က ရွှေဂုံတိုင် က လူနေအိမ်ခြေ သိပ်မရှိသေး…… ဦးဟုတ်ဂွမ် အလောင်းကို ..ခြုံထဲပစ်ထား ခဲ့လိုက်သည်..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ၊ အုန်းဖေ နဲ့ ထွန်းတင် တို့ အဖမ်းခံရသည်။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် က ရှေ့နေကြီး ဦးကျော်ဇံ ကို ငှားရမ်းထားခဲ့ပါတယ်… တရားခွင် မှာ အုန်းဖေ က ဖြောင့်ချက်ပေးသော် လည်း မျက်မြင်သက်သေ မရှိ ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖိုးတုတ် တို့ အုပ်စု တရားသေ လွတ်ခဲ့သည်..။
ဖိုးတုတ် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပုလိပ်လောက နှင့် တရားစီရင်ရေးလောက အကြား ပြသနာ များဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်..။
ပျက်ယွင်းနေသော တရားစီရင်ရေး စနစ်တစ်ခု ၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် ဖိုးတုတ်နှင့် တပည့်များ ကြိုးဒဏ် မှ လွတ်သွားကြပြန်သည်…..။
ငွေများ အမှုနိုင်ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ…………….ဦးဟုတ်ဂွမ် ဆိုသော ပုလိပ် အရာရှိတစ်ဦး အတွက် အမှန် တရားသည် နေရာ မရနိုင်ခဲ့ရှာပေ……..။
ဦးဟုတ်ဂွမ် ကိစ္စပြီး ကတည်းက လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် လူမိုက် ဘ၀ကို စိတ်ကုန် ခဲ့ပါတယ်..
မိတ်ဆွေ အရင်းအချာ တစ်ယောက်ကို အရက်ရှိန် ၊ တပည့်ဇောများ နှင့် သတ်ပစ်ခဲ့ မိသည့် အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်..
ပုလိပ်အဖွဲ့များ ကလည်း ဖိုးတုတ် အမှား ကိုစောင့်နေကြတော့ သည်.. ဘာပဲပြောပြော ဖိုးတုတ် က ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ၀န်ထမ်းတွေကို ပါ ထိခိုက်လာပြီ မဟုတ်ပါလား……….။ လမ်းမတော် ရဲစခန်း က ဖိုးတုတ်ကို ရာဇ၀တ် အက်ဥပဒေ ၁၀၉ ၊ ၁၁၀ အရ ခြေချုပ်ဖြင့် လက်မှတ်ထိုးစေသည်။
အဲ့ဒီနောက်တော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် သရက်တော ဘုန်းကြီးကျောင်း အတွင်း သင်္ကန်းစည်း ပြီး လူမိုက်လောက ကို ခေတ္တအဆက် အသွယ်ဖြတ်ခဲ့လေတော့သည် ။
၁၉၄၂ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ၊
စစ်အတွင်း ဖိုးတုတ် တို့မိသားစု တွံတေး ၀က်ကင်းကျေးရွာ နှင့် ဆိပ်ကြီးရွာ တို့တွင် တစ်လှည့်စီ သွား ခိုအောင်းနေ ပါတယ်…။
ဘီအိုင်အေနှင့် ဂျပန် တပ်များ ရန်ကုန် ကို သိမ်းပြီးသည့် အချိန်မှ ဖိုးတုတ် တို့ မိသားစု အိမ်ပြန်လာ ကြပါတော့တယ်..။
ပြန်လာလာ ချင်း ရဲဘော်သုံးကျိပ် ရဲ့ ဆရာရင်းဖြစ်သလို အဲ့ဒီ အချိန်က ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ရဲ့ အကြံပေး ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူးကီး (ခ) ဗိုလ်မိုးကြိုး ကို လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်က ဖိတ်ခေါ် ပြီး မြို့တော်ခန်းမ မှာ ဧည့်ခံပွဲ လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်..။
ရဲဘော် သုံးကျိပ် ကို ငွေကြေး ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဖိုးတုတ် အကြောင်းကို အရင် ရန်ကုန်မှာ နေပြီး မီနာမီကီကန်း အဖွဲ့ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူးကီးက ကောင်းကောင်းကြားဖူးထား ပါတယ်..။
မကြာမီ ဂျပန် စစ်ဝတ်စုံနှင့် မြင်းတစ်ကောင် ကို စီးပြီး မြို့တွင်း လှည့်လည်နေသော လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ကို တွေ့မြင်ရပါတော့သည်..။
အင်္ဂလိပ်ခေတ် လူသတ် ၊ လုယက်မှုများ တွင် ပါဝင်ခဲ့သော လူမိုက်ကြီး ဖိုးတုတ် သည် ဂျပန်ခေတ် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး တွင် ရန်ကုန်မြို့ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အတွက် လုံခြုံရေး အရာရှိ ရာထူး ရခဲ့ ပါတော့ တယ်………။
ဂျပန် ၀င်လာပြီး တစ်နှစ်ကျော်သည့် အခါ ရန်ကုန်မြို့ သို့ အင်္ဂလိပ်ခေတ် အရာရှိများ တဖွဲဖွဲ ပြန်လာ တာနဲ့အမျှ ဖိုးတုတ် အတွက်နေရာ မရှိတော့ပါဘူး..။
ယခင် အင်္ဂလိပ်လက်ထက် က တာဝန် ထမ်းဆောင်သူများ ကို ရာထူးပြန်ပေးတဲ့ အခါ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် မှာ နဂိုမူလ လူမိုက် အလုပ်ကိုသာ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်..။
၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ၏ သြဇာ အာဏာ ကျဆင်း လာပါတယ်..။
ဆိုးသွမ်းရက်စက် ခဲ့သော တပည့်များ ကိုလည်း ဘီအိုင်အေ စစ်သားများ ၊ ၈ျပန် စစ်ရဲများက လက်စတုံး စီရင်နေသည့် အတွက် တပည့်များ သိပ်မကျန်တော့ ။ စစ် အတွင်း စစ်ပြေးရင်း တပည့်တွေလည်း တကွဲ တပြားဖြစ်ခဲ့ရသည် ။
ဒေါက်တာဘမော် က အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း အဓိပတိ ဖြစ်လာခဲ့သည် ။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် နေရာ တွင် ပုသိမ်ညွန့်ဘဘိုး က နေရာဝင် ယူလာသည် ။
ပုသိမ်ညွန့် ဘဘိုး ကို ဖိုးတုတ် မယှဉ်နိင် ။
ဒေါက်တာဘမော် နန်းရင်းဝန် ဘ၀တွင်လည်း ပုသိမ်ညွန့်ဘဘိုးက အိမ်တော်စောင့် လုပ်ခဲ့သဖြင့် ရင်းနှီး မှုရှိနေသည်။
ဘဘိုး က ဂျပန်ခေတ် သာသနာရေးဝန်ကြီး ဗန္ဒုလဦးစိန် ၏ တူဝမ်းကွဲတော်သလို ညာလက်ရုံး လည်းဖြစ် သည် ။
လမ်းမတော် ဘိုးတုတ် နေ၀င်ပြီ…………။
တစ်ရက်မှာတော့ ဒေါက်တာဘမော် အစိုးရ အဖွဲ့မှ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ကို ဖမ်းဆီး ကာ တရားရုံး တင်ပို့ခြင်း မရှိဘဲ မြောင်းမြထောင် သို့ ချုပ်နှောင် ထားလိုက် ပါတော့ တယ်…….။
မြောင်းမြထောင် ဆေးရုံကြီး တွင် လူမိုက်ကြီး ဖိုးတုတ် တစ်ယောက် လိပ်ခေါင်းရောဂါ ၊ အသဲရောဂါ တို့ဖြင့် အသည်း အသန်ဝေဒနာ ခံစားနေရသည်..။
ဘာကို မှ မကြောက်တတ်ဘူး ဆိုသော လူမိုက်ကြီး အခု တစ်စုံ တစ်ရာကို ကြောက်နေသည်။
ခေတ်ကောင်းစဉ်က ရင်းနှီးခဲ့သည့် ပုလိပ် အင်စပက်တာ ကိုခင်မောင်က ဆေးရုံကို လာကြည့်သည်…။
"ကျွန်တော် ဘာကူညီပေးရမလဲ ကိုဖိုးတုတ်"
"ကျွန်တော် သေတော့မှာပါ… ကျွန်တော့်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက စပြီး ချောက်လှန့်နေတာ ရှိတယ်..အခု ထောင်ထဲရောက်တဲ့ အထိ သူပါလာတယ်….
"ဘယ်သူလဲ ကိုဖိုးတုတ်..ဘယ်သူက ပါလာတာလဲ"
"ဆက်စန်းက ဂန်ဂရားကို ကျွန်တော်တို့သတ်ခဲ့တုန်းက ကုလားမလေး..သူ..သူ ကျွန်တော့် အချုပ်ခန်းမှာ ညတိုင်း လာငိုတယ်…. အခု ဆေးရုံရောက်တော့ ကျွန်တော့် ကုတင်ခြေရင်း မှာ လာငိုနေ တယ်..သူ့မှာ အပြစ် မရှိပါဘူးဗျာ.."
"ကိုဖိုးတုတ် ခင်ဗျားဘာတွေပြောနေတာလဲ..စိတ်ကို ထိန်းပါဗျာ "
"ဆရာ ဆေးပြင်းလိပ် ၊ ထန်းလျက် နဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်လေး စားချင်တယ်"
ကိုခင်မောင် မျက်ရည်လည် သွားသည်။ တစ်ချိန်က ဘာမထီ လူမိုက်ကြီး ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်က …………………..
ခရိုင် ရဲဝန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည့် ကိုခင်မောင် အိမ်ချက်ခြင်းပြန်ပြီး ဖိုးတုတ်မှာသည့် အရာတွေကို စီစဉ်ပေး လိုက်သည် ။
"ဒါတွေ စားရလို့ ဆရာ့ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တစ်ခုပဲ စိတ်မကောင်းတာ…. ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေး မရသေးဘူး.. ကိုအောင်ဆန်း တို့ကို အားကိုးပါတယ် လို့…..ပြောပေးပါဗျာ "
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ရဲ့ စကားက နောက်ဆုံး ကိုကြားရတော့ ကိုခင်မောင် ရင်ထဲနင့်သွားရသည်..။
၁၉၄၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ နာမည်ကျော် လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် အသက်(၄၆) နှစ်အရွယ် တွင် မြောင်းမြ အကျဉ်းထောင်ဆေးရုံ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်..။
လမ်းမတော် ဦးဖိုးတုတ်ရဲ့ အလောင်းကို ညီဖြစ်သူ ဘသိန်း ကိုယ်တိုင် မြောင်းမြမြို့ မှာပဲ ဂူသွင်း သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပါတယ်…။
မင်းပုည ရေးသား လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ၊ ဆရာကြီးသော်တာဆွေ ၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ၊ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်း ပါ ဆောင်းပါး ၊ ဦးဖိုးတုတ် ၏ ညီ ဦးဘသိန်း ဒေါ်ကြင် တို့၏ သမီးဒေါ်ခင်ခင် ၏ ပြောကြားချက်များအား မှီငြမ်းပါသည်။
From: The Express Time
16:00 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
Ooredoo ဖုန်းကဒ်ကိုအသုံးပြုပြီး သကါလ
ဟောဒီလို ဖောင်ပြင်ပြီး ပိုက်ဆံတွေဟာ ဗလီ စာသင်ကျောင်းများသို့ ရောက်ရှိသွားပါကြောင်း။
ooredoo ကဒ် အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပါက မိနစ် ၉၀၀၊
အခြား ကဒ်များနှင့် ဆက်သွယ်ပါက မိနစ် ၉၀၊
facebook အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့်၊
တစ်နေ့ ၂၀ M Internet အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်၊
ဒီ Bonus တွေကို သြဂုတ် ၂ မှ ၁၄ အထိသာဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင်ရောင်းမှာက သြဂုတ် ၁၅ သြဂုတ်၂မှ၁၄ အထိက
စက်စမ်းသပ်တာ ဒါကိုပဲ မြန်မာတွေကို စေတနာရှိလို့
ခေါ်ဆိုခက ooredoo ကဒ်အချင်းချင်းဆိုရင်
တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်၊ အခြာကဒ်တွေ ဆိုရင် ၃၅ ကျပ်
facebook အခမဲ့အသုးံပြုခွင့်ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။
facebook ကြည့်ရင်း ကိုယ့်ဓာတ်ပုံလေးတင်ချင်ရင်
1M ကို ၂၅ ကျပ်ကုန်ပါမယ်။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာ အနည်းဆုံး 3M ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ၇၅ ကျပ် ကုန်ပြီပေါ့။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေး save ချင်ရင်
Sotfware update ချင်ရင် 1M ကို ၂၅ကျပ်ကုန်ပါမယ်။
ဥပမာ Zuma game ကို down ချင်ရင်၊updateလုပ်ချင်ရင်
32M ရှိပါတယ်၊ ဒီတော့ ၃၂×၂၅ ကျပ်ကုန်ပါမယ်။
မြန်မာတွေ မ အ ပါနဲ့။
MPT ကInternet ကို Time usage အစား
Data usage နဲ့ငွေကောက်မယ်လို့ဆိုတုန်းက
ကန့်ကွက်တဲ့ လူတွေ အခုဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။
MPT.က internet speed နှေးချင်နှေးမယ်။
MEC internet speed က ကောင်းပါတယ်။
ooredoo ကဒ်နဲ့ နေပြည်တော်ဝန်းကျင်စမ်းသတ်မှုအရ
ရေဆင်း down speed 45M/sec.up speed 30M/sec
လယ်ဝေး down 58M/sec. up 44M/sec
အမြန်လမ်းပန်းတင် down 52M/sec up 42M/sec ပဲရပါတယ်။
MPT WCDMA နဲ့ သိပ်မကွာလှပါဘူး။
MEC CDMA800Mz ကပိုသာတာတွေ့ရပါတယ်။
down 70M/sec . up 58M/sec အထိရပါတယ်။
အခု ooredoo က အခုပေးတဲ့ Bonus ဆိုတာက
သတင်းတွေဝင်နေရင်လည်း ငွေကုန်နေမှာဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
မြန်မာတွေကို စေတနာရှိလှပါတယ်ဆိုတာ မယုံပါနဲ့။
သူတို့ဟာ စီးပွားရှာဖို့ရောက်လာတာဆို တာ သတိရှိပါ။
Datd usage 1M ကို ၂၅ ကျပ်ဆို
ကမ္ဘာမှာ အများဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။
သူတို့ဇာတိ ကာတာမှာ Data usage 1G ကို 0•55 us ဒေါ်လာပဲရှိပါတယ်။
1G ဆိုတာ 1000M ပါ။
ဒီတော့ 1M အတွက် မြန်မာငွေ ပြား ၅၅ ပဲရှိပါတယ်။
အခု 1M ကို ၂၅ ကျပ်ဆ်ုတော့ အဆ ၅၀၀ လောက်ပိုယူထားတာပါ။
ငွေ ၂၅ မဖြစ်စလောက်ပါကွာလို့ သဘောမထားပါနဲ့၊
၂၅ ပေါင်းများရင် ခင်ဗျားတို့ ထမင်းပျောက်၊ ဘ၀ပျောက်၊
Ooredoo ကုလားကို အားပေးတဲ့ ဗလီဒကါတွေ ဒကါမတွေကို သိစေဖို့ အတွက်ပါဗျာ.......၊
From: DrKyaw Swe
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာသော မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (သို့) အမြန်လမ်းမကြီးရဲ
15:00 သတင်း, အတုယူစရာ No comments
အရင်က မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကြည့်မရအောင် မုန်းခဲ့သည်။
ယခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်တော့ပါ။ကျွန်တော်နှင့်မိသားစု မှာ(20/7/14)နေ့က
မန္တလေးမြို့မှ ပဲခူးမြို့သို့ ရန်ကုန်မန္တလေး အမြန်လမ်း အတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ မိုင်တိုင်(276/1) အနီးနားတွင် ကျွန်တော်နှင့်လားရာတူ ယာဉ်အမှတ်(*/****)အနက်ရောင်
ဟိုင်းလတ်ယာဉ်တစ်စီးမှာ တိမ်းမှောက်လျှက် အနီးနားတွင်လည်း အသားဖြူဖြူအမျိုးသားတစ်ဦးမှာ မှောက်လျှက်အနေအထားတစ်ကိုယ်လုံး ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် သွေးများချွဲနစ်နေပြီး မလှမ်းမကမ်းသစ်ပင်ရိပ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာလည်း ထိုင်လျှက် ဒဏ်ရာများဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။
ကျွန်တော့်အရင်ရောက်နှင့်သော နည်းတူခရီးသွားများအား ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားပြီးပြီလားဟု မေးနေစဉ် မြောက်ဘက်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့လူနာတင်ယာဉ်နှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကားတို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ထိုကားရပ်လိုက်စဉ်မှာပင် အမြန်လမ်းရဲများနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များမှ လျှင်မြန်စွာဖြင့် ကားပေါ်မှဆင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်သူကရိုက် စာရင်းမှတ်သူကမှတ် မှောက်လျှက်ဖြစ်နေသော လူနာမှာ လူမြင်မတော်အောင်ဖြစ်နေ၍ ပုဆိုးကုိဖုံးဖိကာ ချက်ချင်းပင် ထမ်းဆင်ဖြင့်ကားပေါ်တင်ပြီး ဆေးရုံသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။ခဏတွင် နောက်ထပ် အမြန်လမ်းရဲကား အဖြူတစ်စီးမှာ တောင်ဘက်ကလာပြီး မြောက်ဘက်မှလည်း ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့လူနာတင်ကားရောက်ရှိလာကာ သစ်ပင်အောက်မှ ဒဏ်ရာရရှိသူကို ကြက်ခြေနီကားပေါ်သို့တင်ဆောင်ကာ ဆေးရုံသို့ထပ်မံခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။
ကျန်သည့် အမြန်လမ်းရဲကားတစ်စီးမှ ပါတ်ဝန်းကျင် အခင်းဖြစ်စဉ်အားစစ်ဆေးရန် ကျန်နေခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော် အသက် (50)နှစ်ရှိပါပြီ!
အသက်(50)အတွင်းမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်မှုဟာ အများမှ ကဲ့ရဲ့ လောက်အောင် ဆိုးဝါးလှပါသည်။ဒါပေမယ့်လည်း ယခု မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အား ကျွန်တော်၏ အထင်အမြင်နှင့် တစ်ခြားစီမဟုတ်တော့ဘဲ အခင်းဖြစ်နေရာအား ချက်ချင်းရောက် ချက်ချင်းစစ် ဒဏ်ရာရရှိသူအား ချက်ချင်း ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင် ခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ရသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့လ်ို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလို ပြည်သူမှ အားကိုးထိုက်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ နောက်ကျွန်တော်မှ ကျန်ခဲ့သည့်ရဲအား ရဲကားတွေက တောင်ကတစ်စီးလာတယ် မြောက်ကတစ်စီးလာတယ် ဘာလို့လဲ မေးရာ တောင်ဘက်က ကားမှာ ပေပင်လေး အမြန်လမ်းရဲစခန်းမှ ဖြစ်ပြီး မြောက်မှလာသောကားမှာ သီးကုန်း အမြန်လမ်းရဲစခန်းမှဖြစ်ကြောင်း မီးသတ်ကားနှင့် ကြက်ခြေနီကားတို့မှာ သီးကုန်းမှပင်ဖြစ်ကြောင်း ရည်မွန်ချိုသာစွာ ရှင်းပြခဲ့ပြီး အမြန်လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်မတော်တစ ဖြစ်ပါက ရဲစခနိးမရွေးဘဲ နီးစပ်ရာ အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ချက်ချင်းသွားရောက်ပူးပေါင်း ကူညီပေးကြောင်း ရဲကားနှင့်အတူ မီးသတ်ကား ကြက်ခြေနီကားပါ အတူပါကြောင်း ရဲစခန်းတစ်ခုလျှင် လူနာတင်ကားနှင့် လိုက်ထရပ်ကားတို့ နေပြည်တော်ရုံးမှ ထုတ်ပေးထားကြောင်း ပြောပြသဖြင့် ရင်ထဲမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား
သာဓု သာဓု သာဓုဟု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိခဲ့ပါသည်။
From: ပဲခူးသား မျိုးမြင့်
လိင်ဆွဲဆောင်မှုကို အသားပေးလာတဲ့ မိန်းကလေး အဆိုတော်အဖွဲ့များ
တဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးလေးတွေ၊ အရုပ်လေးတွေအသွင်ကို ယူထားကြ၊ အ ချစ်ဦးသီချင်းတွေကို သီဆိုခဲ့ကြပေမယ့်ယခုအခါမှာတော့ တိုလွန်း ကျပ်လွန်းတဲ့ စကပ်တွေ၊ဘောင်းဘီတွေနဲ့လိင်ဆွဲ ဆောင်မှုကိုအသားပေးပြီး အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေး မှုပါလွှမ်းမိုးလာလျက်ရှိတယ်လို့ ကိုရီးယား အနု ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို အစုံအလင် ဖော်ပြ ပေးနေတဲ့Kpop-starz က ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာထောက်ပြခဲ့ ပါတယ်။ ကနဦးS.E.S နဲ့ Fin.K.L. အဖွဲ့တို့မှာအပြစ်ကင်းပြီးချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ဟန်ရှိပေမယ့် ယနေ့ကိုရီးယားပေါ့ပ်ဂီတလောကမှာတော့ အသား ကိုအဓိကအသားေ ပးဖော်ပြလာကြကြောင်း နဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအတွက် ဖျော်ဖြေ ရေးကုမ္ပဏီများကလည်းအချိန်နဲ့စရိတ်ကိုချွေတာ ပြီးအနောက်တိုင်းဂီတဈေးကွက်လို လိင်အသား ပေးဆွဲဆောင်မှုဘက်ဆီ လှည့်စေခဲ့ကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ လိင်ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်း ကောင်းနဲ့ဖျော်ဖြေတဲ့ လီဟိုရီနဲ့ ပက်ဂျီယွန်းတို့လို ဖျော်ဖြေ သူတွေလည်းရှိနေပေမယ့် အခုလို မိန်းကလေး ငယ် အဆိုတော်အုပ်စုလိုက်တွေကပါ အတိုအပြတ် တွေဝတ်ပြီး ဆွဲဆောင်တဲ့သီချင်းတွေသီဆိုနေတာက အဖွဲ့တိုင်းရဲ့တူ ညီချက်လိုဖြစ်လာပြီး ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရာမှာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ယခင်က အပြစ်ကင်းတဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေလုပ်တတ်တဲ့ SISTAR လိုအဖွဲ့မှာတောင် ဖျော်ဖြေတဲ့ အသွင်ပြောင်းပြီး လိင်ဆွဲ ဆောင်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုဆီချဉ်းကပ်ပုံပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ Girl’s Day ကလည်း အလားတူဖြစ်ပြီး AOA (Aces of Angels) အဖွဲ့ကတော့ လိင်ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းအောင် ဖျော်ဖြေတတ်ဆုံး နမူနာပြရမယ့်အဖွဲ့ လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ အရည်အချင်းကိုပြတာထက် လိင်ဆွဲ ဆောင်မှုနဲ့ဖျော်ဖြေတာ ကို အများပြည်သူကအားပေးမှုပိုရလာမလား၊ကိုရီးယားဂီတဈေးကွက်မှာ အနောက်တိုင်းပိုဆန်ပြီး ကိုရီးယားရဲ့ လေဒီ ဂါဂါ တို့ ကိုရီးယားရဲ့ ကေတီပါရီတို့တောင် မကြာခင်နှစ်များအတွင်း ပေါ်လာနိုင်လေမလားလို့ အဲဒီဆောင်းပါးက သုံးသပ်ထားပါတယ်။
From: Popular Journal
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ထူးချွန်ကျောင်းသူ မစုပုံချစ် သို့ ကျပ် ၁၁၇ သိန်းတန်ဖိုးရှိ ခြေတု တစ်ချောင်း သြစတြေးလျအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးရာဌာန က ပြုလုပ်ချီးမြှင့်
13:00 သတင်း 1 comment
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်အင်ဂျင်နီ ယာကျောင်းသူ မစုပုံချစ်အား Australia Department of Foreign Affair ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာကျပ် ငွေသိန်း ၁၁၇ သိန်းနှင့်ညီမျှသော သြစတြေးလျငွေ ဒေါ်လာ တစ်သောင်းသုံးထောင် တန်ဖိုးရှိ ခြေတု (Prosthetics Leg) တစ်ချောင်း ပြုလုပ်တပ်ဆင်ပေးကြောင်း မသန်စွမ်းကျောင်းသူ မစုပုံချစ်ထံမှ သိရသည်။
မစုပုံချစ်သည် မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါမပြည့်စုံသူဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (မဟာ) တန်းတက်ရောက်နေသူဖြစ်သည်။
မစုပုံချစ်သည် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ့ UNSW တက္ကသိုလ်ကြီးမှ ချီးမြင့်သည့် Master of Policy Studies (MPS) ဘွဲ့ကို တက်ရောက်ရန် ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည့် ကျောင်းသူ လည်း ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကာလ ၁၇ လကြာအတွင်း ယင်းခြေတု ကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“သူတို့က Australia Development Award ကပေါ့။ ပညာသင်ဆုနှင့် တစ်ပါ တည်း မော်တာဝှီးချလ်တပ်ပေးမယ်ပေါ့။ ညီမကတော့ ၀ှီးချဲလ်ထက် ခြေတုကို ပိုလိုချင်လို့ ပြန်ပြောတော့ အချိန်လေးနည်းနည်းစောင့်လိုက်ရတာတော့ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ ဘက်ကတော့ ကျွန်မကို ခြေတုလုပ် ပေးမယ်ပြော ပါတယ်။ သူတို့ Joint နေရာမှာ ယမနေသားနဲ့လုပ်မယ်ဆို တော့ ကျွန်မက ခြေထောက်နှစ်ဆင့် လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ သစ်သားနဲ့ ဆိုရင် ပိုနာမယ်လေ။ အခု Prosthetics Leg ဖြစ်တော့ တကယ့် အသားတစ်ခုလို ဘဲ ပျော့ပျော့လေး ဆိုတော့ ညီမအတွက် ပိုလျောက်လို့ ကောင်းသွားတယ် ဟု ပြောသည်။
သြစတြေးလျမှ မဟာဘွဲ့ရခဲ့သူ မစုပုံ ချစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၆ လသာ တက်ရသေးသည့် အင်ဂျင်နီယာ မဟာဘွဲ့ကို ပြီးဆုံးတိုင်အောင် တက်ရင်း သူမ သြစတြေးလျမှ တတ်မြောက် သင်ယူလာသည့် ပညာရပ်များဖြင့် သူမ၏ ဘ၀တူများ အတွက် ပြန်လည် အကျိုးပြုမည်ဟု ပြောသည်။
အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် နောက်ဆုံးအဆင့် ဇာတ်ကား ၆ ကား စာရင်းထုတ်ပြန်
အကယ်ဒမီစိစစ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ အနေဖြင့် သြဂုတ် ၁၄ရက်နေ့က ၂ဝ၁၃ခုနှစ် အတွက် အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် နောက်ဆုံးအဆင့် ဇာတ် ကား ၆ကား စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ ရာ ဟာသကားတစ်ကားပါဝင်လာခဲ့ သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် ဇာတ်ကားများမှာ ဒါရိုက် တာဝိုင်းရိုက်ကူးသည့် နင်စေရင်၊ စေတန်ရဲ့ကချေသည်၊ ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး) ရိုက်ကူးသည့် အဖြူရောင်ရဲတိုက်၊ ကိုယ့်အထာနှင့် ကိုယ်၊ ဒါရိုက်တာပန်းချီစိုးမိုး ရိုက်ကူး သည့် ကြယ်စင်မော်ကွန်း၊ ဒါရိုက်တာ ဝင်းထွန်း ထွန်း ရိုက်ကူးသည့်စုန်းပြူး ဇာတ်ကားများပင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်ဇာတ်ကား ၁ဝကားကို အတည်ပြုရွေးချယ်နိုင် ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်း အရုံးအနေဖြင့် ၂ဝ၁၃ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု၊ အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင်ကားများအတွက် ပထမ အဆင့်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကို ဇွန် ၂၇ရက်နေ့က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နောက် ဇူလိုင်ပထမအပတ်တွင် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ဇာတ်ကား ၁၅ကားကို စတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ သည်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပထမအဆင့်စိစစ်အကဲဖြတ်ရေး အဖွဲ့တွင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးအောင် လွင်၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးကြည်စိုးထွန်း က တာဝန်ယူခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးဇော်ထက်၊ ဦးဌေးအောင်၊ မျိုး သန္တာထွန်း၊ ချစ်ချစ်ဇော်၊ ဦးထွန်းလှိုင် (ဓာတ်ပုံ)၊ ဦးမောင်မောင်မြင့်၊ ဦးလှ ဆန်းဦး (တေးဂီတ)၊ ကိုသက် (အို အေစစ်)၊ မောင်ဗေဒါ၊ မောင်မြတ် ဆွေ၊ ဦးရေအေး၊ ဦးအေးမြင့်၊ ဦး ထွန်းကျော်၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးမြတ်ခိုင်၊ ဒေါ်ခင်ပန်နှင်း၊မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီး ကုန်း)တို့ ပါဝင်ပြီး ပထမအဆင့် ရွေးချယ်မှုကို သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ ကအပြီးသတ်စိစစ်အတည် ပြုလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။ပထမအဆင့် စိစစ် အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက ဇာတ် ကားများကိုမဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် စိစစ်ပြီးနောက် ဇာတ်ကား ၆ကားကို နောက်ဆုံးအဆင့် ရွေး ချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပထမအဆင့် အကဲဖြတ်နေစဉ် အ တွင်းမှာပင်စိစစ် အကဲ ဖြတ်ရေးအ ဖွဲ့တွင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူ ဦးအောင် လွင်က ၄င်း၏ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် အမိုက်စားရုပ်ရှင်ပါဝင် နေသည့် အတွက်ကြောင့်၎င်းကိုယ်တိုင် နုတ် ထွက်သွားခဲ့ပြီး ထိုလစ်လပ်သွား သောနေရာတွင်ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးကြည်စိုးထွန်းကဆက်လက်တာ ဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။
၂ဝ၁၃ခု နှစ်မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူး ချွန်ဆုပထမ အဆင့်မှ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ နောက်ဆုံးအဆင့်ကျန်ရှိသော ဇာတ် ကား ၆ကားကို ဒုတိယ အဆင့်စိစစ် အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင် များ ဖြစ်သည့် ဦးနှင်းမိုး၊ဦးအောင်မြင့်မြတ်၊ ဦးမီး ပွား၊ ဦးမျိုးမင်း၊ဒေါ်မို့မို့မြင့် အောင်၊ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်၊ ဦးဖိုး ထောင်၊ဦးမျိုးညွန့်ဦး၊ ဦးလွင်မိုး၊ ဦးသူရ(ဇာဂနာ)၊ဦးဆွေဆက်၊ ဦးထွန်းအောင်ဇော်၊ ဦးမောင်မောင် လတ်၊ ဦးစန္ဒရားငွေစိုး၊ ဦးဝင်းငြိမ်း၊ လယ်တွင်းသားစောချစ်၊ဒေါ်နုနု ရည် (အင်းဝ)၊ ဦးချစ်သန်းမြင့်၊ဦးမြင့် အောင်၊ ဦးကိုမြင့်၊ ဦးတင်အောင်၊ ဒေါ်ထက်ထက်မိုးဦးနှင့် ဦးအေးကြူ လေးတို့က သြဂုတ် ၁၃ရက်နေ့တွင် စတင်ကြည့်ရှုနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“ဒီလကုန်ဒါမှမဟုတ် နောက် လဆန်းဆိုရင်တော့ပြီးမှာပါ။ အကဲ ဖြတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကားတွေကို ထပ်ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြရဦး မယ်လေ။ဘာကြောင့် အကယ်ဒမီ ဆု ပေးတယ်ဆိုတာကို အချက်အလက် တွေက သေချာရေး ပြီး ဒီအချက်တွေ ကပါရမှာကိုး။ ဥပမာ မင်းသားတစ် ယောက်ကို ဒီဆုပေးသင့်တာတော့ ဟုတ်တယ် ဘာကြောင့် ဘယ်လိုအ ခန်းမှာဆိုတာ ရေးပေးရမှာဆိုတော့ လေ။ အကဲ ဖြတ်အဖွဲ့တွေအားလုံး ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်ပေးရဦးမှာ။ ဒီလကုန်ဒါမှမဟုတ်ရင် နောက်လ ဆန်းလောက်ထိပါပဲ”ဟု နောက်ဆုံး ရွေးချယ်သွားမည့်အစီအစဉ်နဲ့ ပတ် သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အ စည်းအရုံး ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးအေးကြူလေးက ပြော ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဇာတ်ကား ၆ကားကို နောက်ဆုံးအဆင့်ရွေးချယ်ပြီးသည့် အပြင် ခုံသမာဓိအနေအဖြစ် နောက် ထပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်း ထပ်မံ ရှိနေသင့်သည်ကို လိုအပ်ကြောင်းကို လည်း ရုပ်ရှင်လောကသားများထံမှ သုံးသပ်ပြောကြားသံများလည်း ရှိနေပါသည်။
10:00 ဘာသာရေး, သတင်း No comments
09:00 ဘာသာရေး, သတင်း No comments
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတည်ရှိသောနေရာကို ဩဂုတ်၁၆ ရက်ကစတင်တွေ့ရှိထား ပြီဖြစ်ကြောင်း နတ်စင် တစ်ရာ ဆရာတော် က ပြည်တွင်း မီဒီယာအချို့ ကို မိန့်ကြားလိုက်သည်။
''ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာ တဲ့နေရာမှာ သူတို့က ခေါင်းလောင်း ကြီးကို သင်္ဘောပျက်ကြီးအောက် မှာလို့မိန့်တယ်။ ဆရာတော့်အမြင်က သင်္ဘောပျက် နဲ့ပေ၂၀ ၊ ၃ဝအကွာမှာ ရှာပါဆိုတော့ ဩဂုတ်၁၆ရက်နေ့က ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ကို တွေ့ထား ပါပြီ။ သို့သော်လဲ ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်း ရဲ့အသေးအကြီးကို ဆရာ တော်မခွဲနိုင်ပါဘူး။ နောက်လေးငါး ဆယ်ရက်အတွင်း မှာဆိုရင် ထင်ထင် ရှားရှားပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်''ဟု နတ်စင်တစ်ရာ ဆရာတော် က မိန့် ကြားသည်။
ဒီနှစ် မန်ယူချန်ပီယံဖြစ်လျှင် ကိုယ်လုံးတီးပြသ အောင်ပွဲခံမည့် မော်လ်ဒယ်မလေး
မန်ယူအသင်းမှာ ယမန်နှစ် ဘောလုံးရာသီက နည်းပြမိုယက်စ်လက်
ထက်တွင် အဆိုးရွားဆုံးသော စံချိန်များနှင့် အဆင့်ခုနစ်နေရာသာရပြီး ယခုနှစ်
ရာသီတွင် ဥရောပပြိုင်ပွဲပင် ၀င်ပြိုင်ခွင့်မရခဲ့ပေ။
သို့သော် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီတွင် ၀ါရင့်နယ်သာလန်နည်းပြကြီး
လူးဝစ္စဗန်ဟားကို နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး နောက် လု့ခ်ရှောနှင့် ဟာရီယာ
တို့ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး အပြောင်းအရွှေ့စရိတ် ပေါင် သန်း ၂၀၀ အထိ အသုံးပြု
ခွင့်ရထား ၍ သြဂုတ် ၃၁ ရက် အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်မီတွင်
ထိပ်တန်းကစားသမားသစ်များ ထပ်မံခေါ်ယူဦးမည်ဖြစ်ရာ မန်ယူ
ပရိသတ်များက ယခုနှစ်ရာသီတွင် မန်ယူအသင်းချန်ပီယံပြန်ဖြစ်
ထိုအထဲတွင် မန်ယူပရိသတ် ပိုလန်သူ အမျိုးသမီးအတွင်း
ခံကြော်ငြာ မော်ဒယ်လ် မိုနီကာပီရက်စင်စကာလည်း ပါဝင်သည်။
၎င်းမှာ မန်ယူအမာခံပရိသတ်ဖြစ် ပြီး သူမအကြိုက်ဆုံး ဘောလုံး
သမားမှာ ရွန်နီဟု ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ ယခု ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘောလုံးရာသီ
တွင် မန်ယူပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ဖလားရရှိပါက ရာနှုန်းပြည့်
အ၀တ်အစားမပါသော သူမ၏ခန္ဓာကိုယ် ပကတိအလှအား ဖော်ချွတ်
ပြသသွားမည်ဟုလည်း မိုနီကာက ကတိပြုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။